Iphutha leseva yangaphakathi > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Ngabe imiphumela yokuhlolwa kwegazi kwe-prothrombin ne-fibrinogen ikhombisa ngani futhi kungani kubalulekile ukuthi umuntu onesifo sikashukela? Inkomba ye-Prothrombin: okujwayelekile nokuphambuka
Iseva ihlangabezane nephutha langaphakathi noma ukungahleleki kahle futhi ayikwazanga ukuqeda isicelo sakho.
Sicela uxhumane nomphathi wesiphakeli nge-imeyili evikelwe ukubazisa ngesikhathi leli phutha elenziwa ngaso, nezenzo ozenzile ngaphambi kwaleli phutha.
Imininingwane engaphezulu mayelana naleli phutha kungenzeka itholakale ku-log yephutha leseva.
Ngaphezu kwalokho, kuhlangatshezwe iphutha le-503 leseNkonzo elingatholakali ngenkathi izama ukusebenzisa i-ErrorDocument ukuphatha isicelo.
Kumuntu ophile kahle, izinga le-IPT lingahluka kusuka ku-70% liye ku-140%, kepha kwezinye izimo ukuphambuka kungabonakala kubaluleke kakhulu futhi noma kunjalo, kuzothathwa njengokujwayelekile. Isibonelo, ngesikhathi semithi ethile. Njengamanje, odokotela basebenzisa iThebhulethi Lokushesha le-PTI, lisuselwa emininingwaneni eminingi yezibalo kuma-indices wegazi lokuhlangana kwabantu abanempilo, futhi namuhla yiwo afanele kakhulu.
kufika ku-6 80-100
I-45-65 isuka ku-78 iye ku-140
Lokhu kuyathakazelisa! Ukubala i-IPT, kuyadingeka ukuhlukanisa isikhathi se-prothrombin isikhathi sesikhathi se-prothrombin sesiguli esihloliwe, siphindaphindwe nge-100%.
Izizathu zokuphambuka kusuka kokujwayelekile
Izinkomba ze-PTI zincike kuzinga le-prothrombin esegazini, izici eziningi ezihambisana nezifo, umuthi nendlela yakho yokuphila ingaba nomthelela ekwandeni noma ekunciphiseni kwayo. Inkomba engezansi kokujwayelekile iyinkomba yokuthambekela kokopha, futhi ibizwa ngokuthi yi-hypocoagulation. Inkomba ephakeme ibuye ibizwe ngokuthi i-hypercoagulation, ikhombisa amathuba aphezulu wezibopho zegazi angavalela imithambo yegazi. Kokubili ukuphambuka kusongela ngemiphumela eyingozi, kufaka phakathi ukufa.
Izimbangela ezingaba khona zamazinga aphezulu we-prothrombin:
Ukushoda kweVitamin K kukhulisa ukopha, kuphazamisa ukuvela kwezinto zokuqina.
Isibindi sinesibopho sokukhiqiza amavithamini angenhla emzimbeni womuntu, ngakho-ke ama-pathologies wesibindi angaba imbangela.
Indlala yomzimba we-Metabolic ngenxa yezifo zomgudu wesisu.
Into yokwelashwa, ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezivimbayo
Izimbangela ezingaba khona zamazinga aphansi we-prothrombin:
Ukukhulelwa ezinyangeni ezedlule.
Ezinye izidakamizwa ze-steroid.
Kubalulekile! Noma uzizwa uphilile, kepha noma yiziphi izici ezifakwe kuhlu zikhona empilweni yakho, ungabi lazy - hamba uhlolo.
Izindleko zakho zesikhathi nezimali azikwazi ukuqhathaniswa nemiphumela engenzeka yokungasebenzi.
Izici zocwaningo lwezinkomba zabesifazane
Ngesikhathi sokukhulelwa, uhlelo lwe-hormonal lowesifazane lubhekana nesiphepho sangempela. Kulokhu, izinga le-PTI liyakhuphuka, futhi lidinga ukuqashwa njalo futhi, uma kunesidingo, ukulungiswa, ngoba ukwanda okukhulu noma ukwehla kwesimo se-PTI kusongela imiphumela emibi kakhulu kubo bobabili umama nengane. Endabeni yokwanda kwenkomba ye-prothrombin iye ku-150% nangaphezulu, kunengozi yokuqothuka kwe-placental. Esimweni sezinkomba eziphansi, ama-80% noma ngaphansi, amathuba wokopha okusindayo ayenyuka, womabili ajwayelekile nangemva kokubeletha. Ukunganaki ukulawulwa kwe-PTI ngesikhathi sokukhulelwa akwamukeleki nakancane.
Kubalulekile! Ngokwezibalo, bafinyelela kuma-10% abesifazaneenqaba ukuhlolwa kwe-PTI baba nezinkinga ezinzima ngesikhathi sokuzalwa kwengane, ngisho nokufa.
Ungakudlulisa kanjani ukuhlaziya, futhi ubani odinga ukukwenza lokhu njalo?
Kungakhathalekile ubulili, iziguli kumele zihambisane nezincomo eziqinile lapho zinikela ngegazi ngokuhlaziywa kwenkomba ye-prothrombin. Ukudla kokugcina akufanele kube ngaphambi kwamahora we-9 ngaphambi kokuhlaziywa. Isampula yegazi kufanele yenzeke esiswini esingenalutho. Ngobusuku, kunconywa ukwenqaba ukudla okunokuqukethwe okuphezulu kwama-ayisithupha, uwoyela nosawoti. Ngaphambi kokuhlaziywa, khipha ikhofi, i-cocoa, itiye, ushukela nezinye iziphuzo. Phuza kuphela amanzi ahlanzekile angenalutho. Kufanele wenqaba utshwala nokubhema ngosuku ngaphambi kokunikeza igazi. Ukwenqatshela isikhathi eside akuvunyelwe. Tshela udokotela wakho ngemithi oyiphuzayo.
Kubalulekile! Imithi elwa namagciwane, izindlela zokuvimbela inzalo, ama-laxatives nezinye izidakamizwa zingaba nethonya elinamandla ekuhlaziyweni kwe-PTI. Qiniseka ukuthi uxwayisa udokotela wakho ngokuthatha imali enjalo.
Ngaphezu kokuqapha kokuphoqelelwa kwenkomba ye-prothrombin ngesikhathi sokukhulelwa, ukungenelela kokuhlinzwa kanye nezifundo zamahomoni okuvunyelwene ngazo nodokotela, kuyadingeka futhi ukuqapha izinga le-prothrombin egazini ngokwabo, ikakhulukazi ngaphansi kwezimo okuxoxwe ngazo ngezansi.
Uma ungaphezulu kwama-50, kufanele ubheke njalo inkomba yakho ye-prothrombin, kungakhathalekile ubulili. E-Russia, esinye sezinga lokufa eliphakeme kakhulu ezifweni zenhliziyo emhlabeni, ukuxilongwa ngesikhathi kungasindisa impilo yomuntu ongabheki. Uma ungangeni kuleli qembu leminyaka, ungasichithi isidingo sokubheka impilo yakho. Thatha ukuhlolwa okungenani kanye ngonyaka ukuze uvikele, akuwona umthwalo, kepha uma kukhona i-pathology ehlotshaniswa nenkomba ye-prothrombin, izokusebenzela kahle.
Ukunaka! Impilo ingcebo yakho eyinhloko. Musa ukudonsa kuze kubonakale izimpawu ezibonakalayo, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngesifo senhliziyo. Phasa ukuhlolwa kusenesikhathi, ukuze uvikele.
Ukuqashwa njalo kwe-IPT kufanele kube umthetho wabathwali bokufakwa kweenhliziyo, iziguli ezinesifo senhliziyo, isifo sokuqina kwemithambo yethambo, imithambo ye-varicose, izinkinga ze-gynecological, neoplasms ezinobungozi kanye ne-pathologies yesibindi. Futhi kwizakhamizi ezinempilo ezinakekela impilo yazo.
Ngabe amazinga e-prothrombin angathinteka ngaphandle kwemithi?
Uma inkinga inkulu, ngakho-ke awukwazi ukwenza ngaphandle kokungenela udokotela. Noma kunjalo, ukubona izidingo ezithile ze-gastronomic, ungenza elikhulu iqhaza empilweni yakho.
Oatmeal. Kusukela ebuntwaneni, wonke umuntu uyazi ukuthi i-oatmeal yesikhathi sasekuseni iyisihluthulelo sosuku oluphumelelayo, kunencazelo yezokwelapha yalokhu - kuvimbela ukuqina kwegazi.
Amafutha omnqumo, omisiwe
I-Beetroot, ujusi wamatamatisi, into esemqoka ukungangezi usawoti kuyo.
Ujinja - uvimbela ukwakheka kwezigaba zegazi futhi kunciphise igazi.
Iphinifa likaphayini, lingangezwa ku-oatmeal.
Ama-beet - konke kwethu, ku-borsch akalahlekelwa yizakhiwo zawo ezihlobene ne-prothrombin.
Kubalulekile! Ngezinga elikhulayo le-prothrombin, ukusetshenziswa kophuzo oludakayo, okubhemayo nokunamafutha kumele kuncishiswe.
Ezingeni eliphansi, sebenzisa lokhu kudla okuningi okulandelayo ngangokunokwenzeka:
Imikhiqizo equkethe ama-omega-3 acid - uwoyela wezinhlanzi, ukudla kwasolwandle.
Zonke i-oatmeal efanayo, ungumpetha wendawo yonke.
Ama-Berlin ajwayelekile eRussia ama-cranberries, ama-raspberries.
Kubalulekile! Ngezinga eliphansi le-prothrombin, khawulela ukusetshenziswa kwama-legumes, izimpahla ezibhakiwe, amafutha we-buckwheat kanye namafutha ezilwane.
Ngaphezu kwezinga le-prothrombin esegazini, ukuqapha indlela odla ngayo kuzokuvumela ukuthi uxazulule lonke uhla lwezinkinga zempilo.
Emzimbeni womuntu kunegazi elihamba njalo - uketshezi olunikeza impilo olunikeza ukondleka kuwo wonke amaseli omzimba kanye nemetabolism. Ubude bemikhumbi bungamakhilomitha amaningi, futhi indawo yabo ingaphezulu kwengxenye yehektha. Akunakwenzeka ukucabanga ukuthi konke lokhu kufinyelela kanjani emzimbeni womuntu omdala.
Kepha inani lamanzi anikeza impilo lincane: kwabesilisa - okungaphezu kwamalitha amahlanu, nakwabesifazane - cishe abane. Ngakho-ke, lapho ukulimala noma ukusikeka kwephula ubuqotho bohlelo lokujikeleza, okuqukethwe kungakhipha ngokushesha, kusongele umuntu ngomphumela obulalayo.
Uma ukuchitheka kwegazi kungavinjelwe, isigaxa esiyisisekelo sokuhambisa okunondla umzimba wonke siyoyeka ukuba khona.
Ukuvimbela lokhu kungenzeki, imvelo yakha uhlelo olubhekele ukujiya kwegazi. Nguye okwaziyo ukwethula izindlela zokuzivikela ezivala isilonda futhi angavumeli igazi ukuphuma emithanjeni.
Inani le-prothrombin emzimbeni
Ingxenye yalolu hlelo ngamaprotheni akhethekile e-plasma abizwa ngokuthi ama-coagulation factor. Zikhonjiswa ngezinombolo zamaRoma kusuka ku-I kuye ku-XIII. I-Prothrombin ingesinye sezakhi ezibalulekile. Le proteni yinto eyindida II.
Igama "prothrombin" lisikisela ukuthi kungumbuso wokuqala we-thrombin, i-enzyme esebenzayo. Ngosizo lwakhe, amafomu e-clot (thrombus), amboza isilonda nokuvimba ukulahleka kwegazi.
Izinga elijwayelekile le-prothrombin libonisa ukuthi inqubo yokuhlangana kwegazi isebenza kahle futhi umzimba ungamisa ukulahleka kwalo manzi anikeza impilo ngesikhathi.
Ukutadisha okuqukethwe kwamaprotheni akwenziwa kaningi njengokuhlolwa kwegazi okwenziwa ngegazi. Le nqubo ayilula futhi ichazwa kuphela uma kunesimo esiphuthumayo, ngokwesibonelo, ngezifo zegazi noma lapho kunezinkinga ngokuqina kwaso.
Ukunqunywa kwezinga le-prothrombin - ukuhlolwa okubaluleke kakhulu kwe-heestasiogram .
Ama-molecule we-Prothrombin ahlukana ngokushesha okukhulu futhi kalula. Kunzima ukubahlukanisa namanye amaprotheni, okwenza kube nzima kakhulu ukuzindla kwezinga lawo. Ekuhlaziyweni kwezinga, kusetshenziswa izindlela eziningana.
I-Prothrombin Ngokushesha . Namuhla, le ndlela iyamukelwa ngokuvamile futhi ivamile. Le ndlela ihlinzeka ngokubalwa kwezinga lezinto njengephesenti lemali evunyelwe. Amanani alandelayo abhekwa njengezinga eliphezulu (%):
ubuncane - 70,
inani eliphakeme liyi-120.
Inkomba ikuvumela ukuthi unqume umsebenzi we-plasma eyinkimbinkimbi yokuqhathanisa nokuqhathaniswa okuhlukahlukene kwe-plasma yesiguli. Igrafu yezinguquko ze-prothrombin ihlanganiswe, ukwakhiwa kwayo kusekelwe kudatha yesikhathi sokuhlangana kwegazi.
Ukuhlaziywa okusheshayo kubhekwa ngochwepheshe njengokunembe kakhulu lapho kuqoshwa amanani aphansi we-prothrombin.
Inkomba ye-Prothrombin - futhi inqunywe njengephesenti. Inkomba ejwayelekile ikule mikhawulo (%):
ubuncane - 95,
Imiphumela yokuhlolwa okubili okushiwo ngenhla ingahle ihlangane uma i-prothrombin ivamile. Kepha uma inani layo liphansi kunele, lihlukahluka kakhulu. Inkomba incike kakhulu ekuzwisaneni kwamakhemikhali asetshenziswa kuhlolo.
Isikhathi se-Prothrombin - Kukhombisa imizuzwana emingaki iplasma ihlangana ngemuva kokufaka ingxube ekhethekile kuyo.
Idatha yokuhlolwa kokugcina incike eminyakeni yobudala. Ezinganeni ezisanda kuzalwa, isikhathi sokuhlangana kwegazi singasukela kumasekhondi ayi-14 kuye kwayi-18. Futhi lezi zinkomba zijwayelekile. Kubantu abadala, isikhawu semizuzwana eyi-10 kuye kwayi-15 sithathwa njengokuphezulu.
Ubudlelwano Bwamazwe Ngamazwe Ojwayelekile - INR . Le ndlela iyakhethwa futhi isetshenziselwa ukulawula imiphumela yokuhlolwa kwe-prothrombin.
Indlela ye-INR inconyelwa ngochwepheshe be-WHO kanye nezinye izinhlangano namakomidi aphesheya atadisha i-thrombosis futhi afike ku-hematology. Imiphumela yalokhu kuhlola ivumela udokotela ukuthi aqaphele ukusebenza kahle kokwelashwa ngama-anticoagulants - izinto zokwenziwa ezinciphisa izinga le-prothrombin esegazini futhi inciphise ukuqina kwayo. Le mishanguzo isetshenziswa ekwelapheni i-thrombophlebitis, i-thrombosis, okuwukuthi, izifo ezibangela ukuqhekeka kwegazi okuyingozi emithanjeni ye-venous.
I-INR imvamisa ingu-0.85-11.15.
Lapho ukwelashwa kwezifo ezinjenge-pulmonary embolism, i-venous thrombosis, noma i-pathology ye-valves yenhliziyo sekukhona, imikhawulo evumelekile iyanda ibe ngu-3.0.
Izinkomba zokuhlolwa kwe-prothrombin
Ukuhlolwa kwegazi kwe-prothrombin kungabekwa ngudokotela ezimweni ezinjalo:
isiguli sinokopha okungapheli isikhathi eside (lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi ukuqubuka kwegazi kungaphansi kokujwayelekile),
ukusebenza kwama-enzymes wesibindi nesibindi sekuyancipha,
kokubheka ukwanda kokusetshenziswa kokusetshenziswa kwama-anticoagulants isikhathi eside,
nge-antiphospholipid syndrome ukuze kucace imbangela yesifo,
uma kukhona izifo ezihambisana nokuntuleka kwe-Vitamin K.
Ezinye izizathu ezingaqondile ezidinga ukuhlaziywa kwe-prothrombin zikhethekile kuphela. Imvamisa, lolu cwaningo lunikezwa abesifazane abasukela eminyakeni engama-50 kuye kwengama-60. Kungalesi sikhathi lapho kwenzeka khona ushintsho lwamahomoni, lubangele ushintsho ekwakhekeni nasekwakheni kwegazi.
Odokotela abanjalo bangakunquma ukuhlaziywa:
udokotela wezifo zengqondo
Ocwaningweni, kusetshenziswa igazi elivela emithanjeni. Ukuze imiphumela ilunge ngangokunokwenzeka, imithetho ejwayelekile kufanele ibonwe ngaphambi kocwaningo:
isidlo sakusihlwa ngaphambi kwamahora ayisishiyagalombili kusihlwa, okungenani amahora angu-12 ngaphambi kokuhlolwa,
ngaphambi kocwaningo, kubalulekile ukubeka i-nerves hhayi ukuthi uhlukumeze umzimba,
ungabhemi ngosuku lokuhlolwa futhi ungathathi iziphuzo ezinamandla.
Njengokujwayelekile, igazi linikelwa ekuseni esiswini esingenalutho. Kuyadingeka ukwazisa abasebenzi bezokwelapha ngayo yonke imishanguzo eyaphuzwa ngosuku lokugcina.
Okuqukethwe okwandayo kwe-prothrombin egazini kukhombisa ukuthi ukuhlangana kwegazi kungaphezu kokujwayelekile. Lokhu kusho ukuthi iba yi-viscous ngokweqile, ehlanganisa ukuhamba kwegazi futhi iholele ekuqhekekeni kwemithambo yegazi.
Izifo ezinjalo zingavusa ukwanda kokuqukethwe kwe-prothrombin, futhi ngenxa yalokho ukuqina kwegazi:
i-angina pectoris ethuthukayo.
Izinto ezinjalo zingakhuphula inani lamaprotheni:
ukweqiwa kwe-Vitamin K emzimbeni okhiqizwa kuyo i-prothrombin,
ukusetshenziswa kwama-anticoagulants, ama-antibiotic, i-nicotinic acid, izithiyo zokuvimbela inzalo kwezomzimba ekwelashweni. Ukusetshenziswa ngokweqile kwe-aspirin, ama-anabolic steroid, nezidakamizwa ezi-laxative kungathinta nokukhula kwe-prothrombin.
Kaningi, okuqukethwe kwamaprotheni kuyanda ngesikhathi sokuzala kwengane. Imvamisa, lokhu kuvezwa ku-trimester yokugcina futhi akudingi ukwelashwa.
I-Prothrombin incishisiwe: izimbangela
Izinga eliphansi le-prothrombin liyingozi ngoba ukulimala okuncane okulimaza isitsha segazi kungaholela ekulahlekelweni kwegazi okukhulu. Ngemuva kwakho konke, ukwakheka kwejazi legazi kuhamba kancane kunokuba kufanele.
Amazinga wehlisiwe we-prothrombin adala izizathu ezinjalo:
Amanye ama-pathologies wesibindi, yize iningi lawo lihambisana nokukhula kwamaprotheni. Okuqukethwe kwe-prothrombin kuyancipha ngezindlela ezinesifo se-hepatitis esibuhlungu futhi esingamahlalakhona. Ngokufanayo kuthinta ne-cirrhosis.
Ukungalingani okwanele kwe-Vitamin K komzimba. Le nqubo iba kaningi ngenxa yokugula kwendlela yokugaya kanye ne-dysbiosis.
Ukushoda kwe-Fibrinogen - iprotheni ekhiqizwa esibindini ibuye iphenduke i-fibrin, okuyisisekelo sethambeka ngesikhathi sokuhlangana kwegazi. Isiphambeko esinjalo singaba sobabili futhi sizalwe.
Ukuthatha izinjongo zokwelapha ezikhuthaza ukwanda kwegazi okwandisiwe.
Kungenzeka ukubuyisa izinga le-prothrombin emuva kokujwayelekile, kepha kukhona okudingeka kwenziwe kuphela ngemuva kokubonisana nochwepheshe.
Ukwelashwa kuhloswe ngakho ukuqeda izifo ezibanga leyo nkinga. Kaningi, isisekelo sokwelashwa ukudla okukhethekile.
Ukuvuselelwa: NgoNovemba 2018
Uhlelo lokuhlangana kwegazi lungenye yemisebenzi ebaluleke kakhulu yokuzivikela yomzimba wethu. Ngaphansi kwezimo ezejwayelekile, lapho umzimba ungekho engozini, izinto ezenziwa ngokuhlangana kanye ne-anticoagulation zilingana futhi igazi lihlala liyindawo ewuketshezi. Kepha uma umonakalo esikebheni usenzekile, ukuqothuka ngokuphelele kokuphazamiseka kuqale ngokushesha, kuhlelwe ukuthi kwakhiwe i-beg yegazi futhi kuvimbe nomonakalo.
Luyini uhlelo lokuhlangana?
Uhlelo lwe-heestasis luyinkimbinkimbi kakhulu, lubandakanya izicubu eziningi nezici ze-serum.Ukwethulwa kwayo kubukeka njenge-Cascade: kuyichungechunge lokuphendula, isixhumanisi ngasinye esilandelanayo esisheshayo ngama-enzyme angeziwe.
Isikimu esenziwe lula sokugobhoza kwegazi sibukeka kanjena: i-thromboplastin ikhishwa kwi-endothelium eyonakele, ngokubamba iqhaza kwe-calcium ions no-Vitamin K, kusebenze i-prothrombin. IProthrombin iguqulwa ibe yi-thrombin esebenzayo, yona edala ukwakheka kwe-insoluble fibrin kusuka ku-fibrinogen encibilikayo. Le nqubo iphothulwa yisigaba sokudonswa kwengubo yegazi, okungukuthi, ukusebenza kwayo kanye nokuqothuka kwangempela komonakalo.
Esigabeni ngasinye, kunezinto eziningi ezibandakanyekayo kulolu hlelo. Sekukonke, ama-plasma ayi-13 kanye nama-platelet angama-22.
Le yi-glycoprotein ekhiqizwa kumaseli wesibindi, i-II plasma coagulation factor.
Ukuhlanganiswa kwe-prothrombin kudinga i-Vitamin K, ngakho-ke esinye sezizathu zokuncishiswa kwayo ukungabambeki kahle kwale vithamini ekudleni noma izinga layo eliphansi lokuhlangana emathunjini.
I-Prothrombin iprotheni ye-inert, ukusebenza kwayo kwenzeka ngaphansi kwethonya le-XII coagulation factor (uhlelo lwangaphakathi) noma ngomonakalo we-endothelium (indlela engaphandle ye-heestasis).
Ekusebenzeni, kusetshenziswa ukuhlolwa kwekhwalithi ephezulu ye-prothrombin, okubonisa okuqukethwe kwayo esegazini kuphela. Zisuselwa ekubalweni kwenkathi yesikhathi lapho igazi lihlangana khona lapho izishoshovu ze-thrombokinase zengezelelwa kukho (okuthi kusebenze i-prothrombin, ukuyiguqula ibe yi-thrombin, futhi i-thrombin ikhuthaza ukuguqulwa kwe-fibrinogen ku-fibrin).
Ngakho-ke, lapho sithi "ukuhlaziywa kwe-prothrombin", "igazi le-prothrombin", lokhu akusho ukuthola ukuthi kugxilile egazini, ngoba, ngokwesibonelo, i-glucose, i-hemoglobin noma i-bilirubin iyahlolwa. Futhi umphumela awunikezwe amayunithi wokubala, kodwa njengephesenti. Lo mqondo uphawula indlela yangaphandle ye-hemocoagulation bebonke futhi ikhombisa umsebenzi wayo yonke inkimbinkimbi ye-prothrombin (izinto II, V, VII, X).
Kwenziwa kanjani ukuhlolwa kwe-prothrombin?
Umnyombo wazo cishe zonke izindlela zokutadisha umsebenzi we-prothrombin tata ukubala isikhathi sokwakheka kwe-fibrin clot ngokushesha ngemuva kokuthi izishoshovu zifakwe egazini, futhi futhi siqhathanise lesi sikhathi ngamanani ajwayelekile.
Igazi liqoqwa kwishubhu yokuhlola ene-anticoagulant (sodium citrate). Ishubhu legazi le-citrate lishiswa kancane kubhavu wamanzi. Kufakwa kuyo i-reagent equkethe i-thromboplastin ne-calcium chloride kuyo. Isitophuwashi silinganisa isikhathi sokulahleka kwemicu ye-fibrin. Lesi isikhathi se-prothrombin (PV). Inani elijwayelekile yimizuzwana eyi-11-15.
Ngemuva kokunquma i-PV yesiguli, kuqhathaniswa nesikhathi esijwayelekile se-prothrombin (PVN). Ngokuvamile kukhonjiswa ku-vage reagent futhi kuya ngomsebenzi we-thromboplastin asetshenzisiwe. Imvamisa lesi sibalo sisuka kumasekhondi ayi-12 kuye kwangama-18 (kusampula ngalinye elisha le-reagent lingahluka). Isilinganiso se-PVN ne-PV yohlolo, esivezwa njengephesenti, kuyinkomba ye-prothrombin (PI). Inani layo elijwayelekile ngu-80-105%. Isikhathi eside isikhathi sokuhlangana kwegazi (i-PV), sehlisa i-PI, esizokhombisa i-hypocoagulation.
Ukuhlolwa kususelwa kubungako besikhathi esijwayelekile se-prothrombin sokubekezela i-PV, esivezwe njengephesenti. Kepha indlela ibhekwa njengenganembe kakhudlwana. Kulolu cwaningo, kusetshenziswa izithasiselo eziningana ze-plasma (1: 2, 1: 3,1: 4) nokwakhiwa kwegrafu yokulinganisa. Ngokuxutshwa ngakunye, i-PV inqunywa futhi iyaphawulwa kwigrafu.
Amanani we-prothrombin ngokuya nge-Quick asuka ku-75% aye ku-140%.
Ngaphakathi kokuqukethwe kwamaprotheni okujwayelekile, imiphumela esheshayo neye-PTI ingalingana. Ngokuqukethwe okuphansi, lezi zinkomba kwesinye isikhathi ziyaphambuka.
Enye inkomba I-INR (isilinganiso esijwayelekile samazwe omhlaba). Isetshenziselwa ikakhulukazi ukuhlola ukusebenza kokusetshenziswa kwama-anticoagulants. Le nkomba ibalwa ifomula:
I-INR = (isiguli se-PV / isho i-PV ejwayelekile) * inani lenkomba yokuzwela ye-thromboplastin yaphesheya (I-ISI).
Inkomba le iboniswa kufakwa ngalinye le-reagent. I-INR ikuvumela ukuba wenze ngokwejwayelekile imiphumela ye-PV ne-PTI eyenziwe kumaelebhu ahlukene. Inani le-INR kubantu abanempilo ngu-0.8-1.2.
Amanani we-prothrombin ngokusho kwe-Quick ne-INR alingana ngokulinganayo komunye nomunye: uma i-prothrombin ngokusho kwe-Quick inyuka, khona-ke i-INR iyancishiswa futhi okuphambene nalokho.
Lapho i-prothrombin ihlolwa
Ukuhlaziywa kwe-coagulation (i-coagulogram) akuyona ukuhlolwa okujwayelekile, ayinqunyelwe kuzo zonke iziguli ngokulandelana. Ukuhlolwa kwenziwa kulezi zimo ezilandelayo:
Ukuba khona kwezimpawu ezibonisa izinkinga zokugabha: ukuvama kwempumulo nokunye ukopha, ukulimala ngaphandle kwesizathu, ukopha izinsini lapho uxubha amazinyo akho, ukuqubuka kwe-hemorrhagic esikhunjeni.
I-Thrombophlebitis yemithambo yemikhawulo ephansi.
Ukuhlolwa kwesiguli ngaphambi kokungenelela kokuhlinzwa.
Qiniseka ukuthi uhlola abakhulelwe.
Ukulawula ngesikhathi sokwelashwa ngama-anticoagulants. Babekelwe iziguli ezine-arrhythmias, ngemuva kokufakwa esikhundleni kwe-valve, nge-thrombophlebitis. Inhloso yale mishanguzo ukukhulisa isikhathi sokuhlanganiswa kwegazi, kepha ngasikhathi sinye ukuwagcina ephephile. Kulokhu, i-PV izonyuswa ngezikhathi eziyi-1.5-2, i-IPT ne-prothrombin ngokusho kwe-Quick ziyancishiswa, i-INR iyandiswa (ngokuphepha iya ku-2-3).
Ngezifo zesibindi, ukucacisa ukungasebenzi kahle kwayo.
Ngaphambi kokuqokwa kwama-hormone aqukethe i-estrogen, kanye nangesikhathi sokuphatha kwawo.
Amanani we-Prothrombin emaqenjini ahlukahlukene eziguli
Amanani ale glycoprotein esegazini ahluke kancane emaqenjini ebudala obuhlukile. Ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-18 yobudala, okuqukethwe kwayo okujwayelekile kusuka ku-80 kuye ku-110%, kubantu abadala - kusuka ku-78 kuye ku-145%.
Imikhuba emadodeni nakwabesifazane abadala ayihlukile. Ukwanda okulinganiselayo kwe-prothrombin kungaba kwabesifazane ngaphambi kokubeletha.
Le nkomba inqunywa kuwo wonke ama-coagulograms. Kusho ukuthini ukuthi inkomba ye-prothrombin?
Izinga lenkomba ye-prothrombin liyi-80-105%. I-PV yesiguli ethe xaxa uma iqhathaniswa nejwayelekile, engezansi iyoba yi-PI yayo futhi okuphambene nalokho. Ngokuvumelana nalokho, inkomba ephansi ikhombisa ukukhohlakala okungahambi kahle, futhi inkomba ephezulu ibonisa i-hypercoagulation (ukuthambekela kwe-thrombosis).
I-prothrombin index assay inikezwe ezimweni ezifanayo ne-Quick prothrombin assay. Ngokuyisisekelo, womabili la maxabiso anokuhlobana okuqondile futhi angafana kububanzi bokuqukethwe okujwayelekile.
Imvamisa yenkomba ye-prothrombin ngesikhathi sokukhulelwa iyahluka kancane kuma-trimesters:
Ungayikhipha kanjani ku-coagulogram
Lokhu kuhlaziya kwenziwa ukuze uthole izimpendulo zemibuzo:
Ngabe igazi lihlangana ngokujwayelekile?
ngabe kukhona ubungozi bokuthi wehlise umoya ngemuva kokuhlinzwa noma ngemuva kokubeletha,
yisiphi isizathu sokuphuma kwegazi njalo nokulimala,
yiluphi uhlobo lwama-anticoagulants luphephile uma kunesidingo.
Izimbangela eziphambili zokuncipha kwe-prothrombin
Khumbula ukuthi i-prothrombin yiprotheni eyakheka kumaseli wesibindi ngokubamba iqhaza kuka-Vitamin K. Idlulela esimweni esisebenzayo ngosizo lwezicubu eziningana ze-plasma ne-plasma coagulation factor. Uhlobo oluyimbangela yokwenziwa okuvamile kwe-prothrombin luyabonakala, futhi lutholakala ku-chromosome 11.
Ngaphezu kwalokho, kunezici ezibulala amagazi egazini, umsebenzi owandayo ongavimbela izakhi zenkimbinkimbi ye-prothrombin.
Kule ndlela yokusebenza komzimba, izimbangela eziphambili ze-prothrombin ephansi kanye nokulandela kwe-IPT (i-PV ne-INR ziyanda):
I-pathology ye-Congenital - izinguquko ezinhlotsheni zezakhi zofuzo ezibhekene nokuhlanganiswa kwe-prothrombin (akuvamile ngokwanele).
Izifo zesibindi, ezihambisana nokuncipha kokusebenza noma ukufa kwe-hepatocytes: hepatitis engapheli, i-cirrhosis. Ukuntuleka kwamayunithi wokuhleleka kokuhlanganiswa kuholela eqinisweni lokuthi i-prothrombin esegazini iyancishiswa.
Ukuntuleka kweVitamin KLokhu kwenzeka zombili uma kwenzeka kungekho kudla okwanele ngokudla, kanye nokwephulwa kokufakwa kwayo kanye nokwakheka emathunjini. Ngakho-ke, izifo zesisu ezihambisana ne-dysbiosis kanye nokumuncwa kwamafutha okulimaza nakho kungaholela ekushoneni.
Amazinga ancishisiwe we-V, VIII, i-X coagulation factor.
Izifo ze-Autoimmune, kufaka phakathi ukuthuthukiswa kwama-antibodies kuma-prothrombin (ngokuqondile, ku-phosphatidylserine-prothrombin tata).
Amazinga aphansi we-fibrinogen.
Isigaba sesibili se-DIC syndrome (isigaba sokudangala).
Umsebenzi owengeziwe we-anticoagulation factor antithrombin III.
Ukwelashwa ngama-anticoagulants (i-heparin, i-fraxiparin, i-warfarin, neodicumarin).
Izimbangela ze-Prothrombin kanye nokwenyuka kwe-IPT
Ukwanda kwe-IPT kubonisa i-hypercoagulation futhi kuyingozi ekuthuthukisweni kwe-thrombosis (ukushaya kwenhliziyo, imivimbo, umlenze we-vein thrombosis, i-pulmonary embolism). Lesi simo asisihle neze ngemuva kokuhlinzwa nangemva kokubeletha.
Amaviki okugcina okukhulelwa.
I-DIC - i-syndrome (isigaba sokuqala 1).
Ukusetshenziswa kwama-hormone aqukethe i-estrogen ngabesifazane (futhi kwesinye isikhathi abesilisa).
Vitamin K ngokwedlulele.
Ukuguqulwa kwezakhi zofuzo ze-prothrombin G20210A (abathwali bohlobo olungenaphutha yi-2-3% yabantu).
Isikhathi ngemuva kokuhlinzwa kanzima, shisa izifo.
I-Antithrombin Defence III.
Prothrombin ukuthi kuyini
I-Prothrombin iprotheni ebhekene nokuqunjelwa kwegazi. Yile nto lapho, phakathi kwexhaxha lokuhlanganiswa, iphenduka i-thrombin lapho ilimele. Kwakhiwa i-thrombus kuyo. Ngenxa yalokhu kufakwa kwegazi, isilonda sivaleka, futhi umuntu akakwazi ukulahlekelwa inani elikhulu legazi. Ngokukhuphuka kwe-prothrombin, kunengozi yokuqhekeka kwegazi emithanjeni, emithanjeni nasemithanjeni, futhi ngokuntuleka kwayo, kuphakama igazi eliningi.
Wonke umuntu kufanele aqaphe izinga le-prothrombin, ikakhulukazi ngemuva kweminyaka yobudala engama-40. Lokhu kuzovumela ukutholwa kokuphulwa okufika ngesikhathi futhi kuvikele ukuthuthukiswa kwezifo ezibulalayo. Ngokwezibalo, uhhafu wabantu bomhlaba wethu banokuphambuka kwenqanaba le-prothrombin kwelinye icala. Ukwephula umthetho kuyimbangela yokuhlaselwa yisifo senhliziyo, imivimbo, i-thrombosis nezinye izifo eziyingozi kakhulu.
Ukuhlolwa kwegazi kwe-PTI kwe-biochemical kunquma isilinganiso segazi lokuhlangana kwegazi lomuntu ophilile nesiguli. Ngokwale nkomba, odokotela bahlulela inani le-prothrombin esegazini.
Umphumela wokuhlaziywa uboniswa njengephesenti.
Ukwephulwa kwezinga le-PTI kuvame ukuhlotshaniswa nezifo zesibindi, ngoba le protein yenziwa kuyo. Ngakho-ke, ukuhlaziya akuvumeli kuphela ukuthola isifo segazi, kodwa futhi nokuthola isifo sesibindi. Ukuhlolwa kwegazi kwe-IPT kuyimpoqo kubantu ngaphambi kokuhlinzwa.
Yini okudingeka uyitshele udokotela?
Qiniseka ukuthi ubhala yonke imishanguzo oyiphuzayo noma osuyiphuzile muva nje, kufaka phakathi izithasiselo zokudla. Izidakamizwa eziningi zivame ukuthinta ama-coagulogram indices, futhi lokhu akusebenzi kuma-anticoagulants kuphela. Ngakho lingancipha i-prothrombin Nevigramon, i-Streptomycin, i-Tetracycline, i-Levomycetin, i-L-thyroxine, i-Vitamin A, i-Aspirin kwimithamo ephezulu.
Khulisa i-IPT may: ama-hormone okulawula ukuzala, i-caffeine, ama-antihistamines, imithamo ephezulu yamavithamini C, K, ama-corticosteroid mahormone.
Ukuphuza ngokweqile isikhathi eside kunganciphisa ne-IPT.
Ukudla ngokweqile ekudleni okucebile ku-Vitamin K kungaholela ekwandeni kwe-prothrombin, kanye nokudla kwabo okunganele - ngokuhlukile, ukwehla. Lokhu kuyimikhiqizo efana nemifino, imifino eluhlaza nezithelo, nesibindi.
Abesifazane kumele baziswe ngokuba khona kokukhulelwa.
Yiziphi izivivinyo ezingeziwe ezingabekwa?
Ukutadisha kokusebenza kwesibindi (ukuhlaziya okusezingeni eliphakeme kwe-biochemical nokuzimisela kwe-bilirubin, i-hepatic transaminases, inani lamaprotheni, i-albhamuin).
I-Ultrasound yesibindi nepheshana elihlanganisiwe.
I-Fibroelastography yesibindi nge-cirrhosis esolwayo.
Ukunqunywa kwama-antibodies ku-hepatitis yegciwane.
Ukuhlolwa okwengeziwe kohlelo lwe-coagulation (APTT, fibrinogen, isikhathi se-thrombin, ama-D-dimers, ama-plasminogen, ama-antithrombin III, umsebenzi we-plasma fibrinolytic, lupus anticoagulant, njll.)
Ukuhlolwa kwezitho zangasese (ukuhlaziya izindunduma ze-dysbiosis, colonoscopy).
Ungawehlisa kanjani noma ukwandisa inkomba ye-prothrombin?
Uma izinkomba zidlulela ngalé kokujwayelekile, ungesabi. Mhlawumbe, esikhathini esithile ngemuva kokukhanselwa kwemithi ethile, ukuhlaziya okwesibili ngeke kuveze ukuphambuka. Abesifazane abaningi bakhathazekile ngombuzo - yini okufanele yenziwe nokusetshenziswa kwezindlela zokuvimbela inzalo? Uma kutholakala ukuthi kutholakala izifo zenhliziyo nemithambo yegazi, vele uyeke ukuzithatha; uma owesifazane enempilo ngokuvamile, kungathathwa amaphilisi, kepha lokho kuhlolwa kubhekelwa ngezikhathi ezithile.
Ungazama futhi nokushintsha ukudla kwe-DTI uma uqiniseka ukuthi ukudla kwakho kuyantula ngokudla okufana nemifino (iparsley, dill, isipinashi), imifino (iklabishi, i-broccoli), isibaya senkomo noma ingulube. I-PTI ikhuthaza itiye eliluhlaza kahle.
Ngezinga elandayo le-prothrombin kanye nengozi ye-thrombosis, odokotela bavame ukunquma ama-anticoagulants. Kulesi simo, i-warfarin kuphela ngokusobala ezokwehlisa le nkomba. Ama-Anticoagulants wesizukulwane esisha (iPradax, i-Xarelto, i-Elikvis nabanye) enza ezinye izinto zokuqina, ngenkathi izinga le-prothrombin lingase lingaguquki.
I-Aspirin nayo ayishintshi le nkomba, kepha ukuyithatha ngemithamo emincane kunengqondo ukunciphisa ingozi ye-thrombosis.
Kukuziphi izimo lapho kungakufanele ukuchitha isikhathi ekudleni?
Uma izinkomba ze-coagulogram ziphakeme kakhulu noma ziphansi kunokujwayelekile.
Kunezimpawu zokuphazamiseka kwe-homeostasis: ukopha okuvamile noma i-thrombosis.
Ukuba khona kokukhulelwa.
I-coagulogram engafanele enganeni.
Kukhona ezinye izinkomba (ukuqwashisa isikhumba, umchamo omnyama, ukuvuvukala, ukuqubuka, ukulunywa, njll.)
Kulezi zimo, udinga ukuhlolwa ngokugcwele futhi uthole imbangela ye-pathology yohlelo lokugwinya.
> Ukuhlolwa kwegazi kwe-prothrombin, INR (isikhathi se-prothrombin)
Le mininingwane ayikwazi ukusetshenziselwa ukuzelapha!
Qiniseka ukuthi uthintana nochwepheshe!
Iyiphi indlela esetshenziselwa yona, inquma ini?
I-Prothrombin ingenye yezinto ezibalulekile ohlelweni lokuhlangana kwegazi. Kwakheka esibindini ngokubamba iqhaza kuka-Vitamin K futhi kuthuleke ku-plasma yegazi. Lapho uxhumana ne-thromboplastin ne-calcium ion, i-prothrombin iphenduka ibe yi-thrombin, ngaphandle kwawo ukwakheka kwe-lig yegazi akunakwenzeka.
Ama-laboratories wokuxilongwa kwemitholampilo, njengomthetho, enza ukuhlolwa kwe-prothrombin, okwenziwa njengokuzimisela kwe-prothrombin ngokusho kwesikhathi esisheshayo se-prothrombin, isilinganiso esijwayelekile samazwe omhlaba noma inkomba ye-prothrombin.
Isikhathi se-Prothrombin (PTV) isikhathi lapho i-plasma yegazi ihlangana khona lapho kuhlanganiswa kuyo ingxube ye-thromboplastin-calcium. Kukalwa ngemizuzwana.
I-International Normalised Ratio (INR) yisilinganiso se-PTV yesiguli kwi-PTV ejwayelekile evamile. Umphumela wokuhlaziywa yi-coefficient (ingxenyenamba yedesimali).
Inkomba ye-prothrombin (PTI) iphesenti lesikhathi sokugcotshwa kweplasma yegazi lokulawula esikhathini sokugcwala kweplasma yomuntu ohlolwayo. Kuvezwa njengephesenti.
Ukuzimisela kwe-prothrombin ngu-Quick kuyahlukahluka kuhlolo lwangaphambilini kokuthi izithako eziningana zeplasma zokulawula zisetshenziswa ngesikhathi sokwenza kwayo. Lokhu kukuvumela ukuthi uthole umphumela onembe kakhudlwana (futhi ngamaphesenti).
Zonke lezi zinkomba zisetshenziselwa ukuhlola isimo sohlelo lokugoqa kanye nokubona ukusebenza kwe-anticoagulant therapy.
Kukuziphi izimo lapho isifundo sinqunyelwe?
Izinguquko kulezi zinkomba zingenzeka zombili izindlela zokunyuka, nasenkambisweni yokwehla kwamanani wazo.Ngokomtholampilo, lokhu kubonakaliswa yizimpawu zokunyuka noma kwehla kwegazi okwandayo.
Izimbangela zokuthi ikhuphuke i-coagulability ukulahleka okukhulu koketshezi ngaphandle kokuphinda kubuyiswe ngesikhathi (ukugabha, ukushisa), ukuthathwa kwezidakamizwa zehomoni kanye nokwephulwa kwemvume yezindonga zomkhumbi. I-coagulability eyengeziwe ibonwa kwezifo, i-vascular pathology, ukukhulelwa, i-DIC, ngemuva kokuhlinzwa futhi ijwayele ukuboniswa ngezinkinga ezahlukahlukene ze-thrombotic.
Ukwehla kokuqina kwegazi, ukopha kwamanxeba kuya ngokuya kukhula, ukulimala kwenzeka ngezicubu ezithambile zokulimala okuncane, futhi kuvame ukuvela ekhaleni. I-coagulability emibi ibonakala ngezifo ze-hemophilia, izifo zesibindi. Unenkinga yeziguli ezithatha ama-anticoagulants isikhathi eside.
Kuzo zonke lezi zimo, ukuhlolwa kwe-prothrombin kuyimpoqo.
Yini odokotela abakhipha isifundo, futhi ngingenza kuphi?
Ukudlulisela ocwaningweni kukhishwa ngudokotela wobudokotela, udokotela ohlinzayo, udokotela wezifo zamehlo, i-cardiologist, i-hematologist, i-oncologist, kaningi abanye ochwepheshe.
Ukuhlolwa kungenziwa elabhorethri yezikhungo zokuxilongwa zezikhungo zezokwelapha ezihlola ukuhlolwa kwegazi nge-biochemical.
Yini impahla yocwaningo, nokuthi ungayilungiselela kanjani
Indaba yocwaningo yigazi. Uthathwa emthanjeni ngokushesha ngaphambi kokuhlaziywa kushubhu ekhethekile ene-anticoagulant.
Ngaphambi kocwaningo, udokotela ukhansela izidakamizwa ezishintsha ukubumbana kwegazi. Ngakusasa lwenqubo, izitsha ezinamafutha nezinongo, utshwala abukhishwa ekudleni. Kuyalulekwa ukugwema ukucindezelwa okungokomzwelo nangokomzimba. Isampula yegazi yenziwa esiswini esingenalutho.
Imiphumela yocwaningo ijwayelekile.
Imvamisa, inkomba yesikhathi se-prothrombin isuka kumasekhondi ayi-11 kuye kwayi-16. Ukuqina kwe-INR kungu-0.85-1.35. Inkomba ye-prothrombin isebangeni le-80-100%. I-Prothrombin ngokusho okusheshayo - 78-142%.
Ukungathandeki kwale ndlela ukuba khona kwezizathu eziningi ezithinta ukunemba kwemiphumela yocwaningo (ukuntuleka kokuma okucacile kwe-thromboplastin esetshenzisiwe, umthelela wezinye izinto zokubumbana).
Ukubaluleka kwemitholampilo ocwaningweni
Indlela isiza ukuthola i-pathology yohlelo lwegazi lokujiya, ukucacisa ubucayi bayo, ukuqapha ukwelashwa. Kodwa i-prothrombin iyingxenye yohlelo lomzimba we-heestatic, futhi ukuhlolwa kwe-prothrombin akunakuveza konke ukwephulwa. Ngakho-ke, uma kunobufakazi, kuyadingeka ukwenza ucwaningo olunzulu ngohlelo lokujiya kwegazi.
- Inkulumo yedijithali noma yesithombe yokuhlolwa kwegazi kwelebhu okwenzelwe ukubumbana. I-IPT yisilinganiso sokulawulwa (noma okujwayelekile) i-PV ye-plasma ku-plasma yesiguli esithile esikhuliswe nge-100%. I-PV (isikhathi se-prothrombin) isikhathi lapho kufakwa khona i-thrombin clot ngemuva kwe-calcium ne-thromboplastin kufakwa kwi-plasma.
Ngakho-ke, inkomba ye-prothrombin ikhombisa ukuthi isebenza kangakanani uhlelo lokuhlangana kwegazi. Ukwehla kwe-IPT kukhombisa ukubumbana okungahambi kahle (hypocoagulation), okuwukuthi, ukuthambekela kokopha. Ukwanda kwesikhombi kukhombisa ukwanda kwe-coagulability (hypercoagulation) kanye nokuthambekela ekwakhekeni kwegazi.
Ukuhlolwa okunjalo kumele kwenziwe bonke abesifazane ngesikhathi sokukhulelwa. Mayelana nezinguquko ze-hormonal kanye nokuvela kokujikeleza kwe-placental-uterine kwabesifazane abakhulelwe, le nkomba inyuswa kancane futhi ifinyelela kuma-90-120%, okubhekwa njengokujwayelekile.
Kuyo yonke inkathi yokukhulelwa, abesifazane banqunywa isifundo amahlandla ama-2-4. Lokhu kubaluleke kakhulu ngaphambi nje kokuzalwa, ku-trimester yokugcina. Ukwehla kwe-IPT kuye ku-80%, kunengozi enkulu yokopha ngesikhathi noma ngemuva kokubeletha. Uma izinga lenyuka laya ku-160%, ukubumbana kwe-placenta akubandakanywa. Kulezi zimo, umama okhulelwe ufakwa esibhedlela, lapho ebhekwa khona ngaphambi kokubeletha.Ngakho-ke, odokotela banethuba lokulungiselela kangcono ukuzalwa kwengane futhi bagweme ubunzima, kubandakanya obabulalayo.
Izizathu zokwanda nokuncipha kwe-IPT
Le nkomba iphambuka kokujwayelekile ngama-pathologies ahlukahlukene.
I-IPT ingahle ihlehle ngenxa yalesi sizathu:
ngokuntuleka kwe-vithamini K, okudingekayo ekuhlanganiseni kwezinto zokuqina kwegazi (ukuntuleka kwale vithamini kuvame ukubonwa ezifweni zamathumbu: i-colitis, i-enterocolitis nabanye),
nokushoda kokuzalwa kwezinto zokuqina,
ekwelapheni i-heparin nezimpawu zayo,
ukwelashwa, okufana neSincumar, Phenilin, Warfarin nabanye,
ezifweni zesibindi, lapho ukuhlangana kwezici zokuqubuka kwegazi ngamaseli wesibindi kuphazamiseka
ngohlobo oluthile lwe-leukemia engamahlalakhona
ukuntuleka kwe-fibrinogen (etholwayo noma ifa),
ukuphazamiseka kwe-protein metabolism.
Ukwanda kwe-IPT kungabonakala:
nge-thrombosis yendawo eyahlukahlukene,
kutholakale kanye - nezimo lapho kungenzeka ukuthi kube khona i-thrombosis ephezulu,
ku-trimester yesithathu yokukhulelwa,
ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwama-corticosteroids, ama-barbiturates, ama-contracepadors ama-hormone.
Kukuziphi izimo ezibekwe?
Kunezinkomba eziningi zokuhlaziywa ku-PTI. Phakathi kwazo kukhona:
ukuphazamiseka ekusebenzeni kohlelo lokuhlangana kwegazi,
ngaphambili wahlaselwa imivimbo, ukuhlaselwa yinhliziyo,
Izimo zokuntuleka kweVitamin K
ukuphathwa kohlelo lokulawula ngesikhathi sokwelashwa ngama-anticoagulants,
ukulungiselela ukwelashwa okuhlinzwa,
ukuhlolwa kwezifundo zokuphazamiseka kwe-coagulation.
Kwezinye izimo, ukuqapha njalo kwe-IPT kuyadingeka. Lokhu kusebenza ezigabeni ezilandelayo zeziguli:
kubantu abane-valves yenhliziyo yokufakelwa (ngenxa yokuphambana okukhulu kwegazi),
iziguli ezinemithambo ye-varicose eziyinkimbinkimbi yi-thrombosis,
abantu abanezifo zenhliziyo ezinjenge-arrhythmia, angina pectoris nabanye (kulezi zimo, izinguquko ze-biochemical egazini zingakhombisa ukwakheka kwezigaba zegazi emithanjeni).
Ngokusekelwe kwimiphumela yalokhu kuhlaziywa, udokotela angathola iziphetho:
Ngabe kukhona okungahambi kahle esibindini,
Ingabe kunovithamini K owanele emzimbeni
Ingabe ukwelashwa nge-anticoagulant kuyasebenza?
Uyini umsebenzi wezinto ezenziwa ngegazi,
ngabe kukhona ubungozi bokuqalwa ukugoqwa kwegazi ngemithambo ye-varicose,
Ingabe kunobungozi obukhulu bokuhlaselwa yinhliziyo nemivimbo.
Ukuhlolwa kwegazi kwe-IPT isifundo esidingekayo ngosuku olwandulela ukuhlinzwa. Umphumela uzokhombisa ukwephula okukhona ohlelweni lwe-coagulation, okungukuthi, ukuthambekela kokopha noma i-thrombosis, okuzosiza ukugwema izinkinga eziyingozi.
Lolu cwaningo lwenzelwa ukuthola amacala lapho kunobungozi obukhulu bokuphuma kwegazi kanye nokuqhekeka kwegazi ngokufakwa kwe-placental kanye ne-gestosis kwabesifazane abakhulelwe.
Ngaphambi kokuthatha igazi ukuze lihlaziywe, udokotela kufanele azi ngezidakamizwa eziphuzwa yisifo sikashukela. Uma kunezidakamizwa ezingathinta imiphumela yocwaningo, zikhanselwa okwesikhashana.
Kulolu cwaningo, awudingi ukulandela ukudla okuyisipesheli noma ukulandela indlela yokudla (ngaphandle kokudla kanye nohlobo oludingekayo lwesifo sikashukela).
Ukubhobozwa kwegazi kwenziwa kusuka emithanjeni engalweni, emva kwalokho indawo yomjovo icindezelwa ngebhola likotini kuze kube yilapho ukopha kuyeka. Uma amafomu okulimaza endaweni yokubhoboza, kunikezwa izinqubo zokufudumeza.
Yiluphi uhlelo lwe-endocrine futhi lusebenza kanjani? Yiziphi izinqubo azibhekele?
Isifo sikashukela esiyinkimbinkimbi: i-arthrosis yamadolo - izimpawu nokwelashwa. Funda kabanzi kule ndatshana.
Ukuphambuka kusuka kokujwayelekile
Izinga elikhulayo lesikhathi se-prothrombin (ngaphezu kwemizuzwana eyi-13) libonisa ukuthi kungenzeka i-thrombophilia ngenxa ye-Vitamin K engaphezulu (funda kabanzi ngamavithamini ancibilikayo, afaka no-Vitamin K kule ndatshana). Kubantu abanesifo sikashukela, isilinganiso siphezulu kakhulu, ngakho-ke kubalulekile ukuthi bahlaziye ngezikhathi ezithile ukuthola ukuthi ukuphambuka kangakanani.
Inani lesikhathi se-prothrombin siphambuke kokujwayelekile siye ohlangothini oluncane (ngaphansi kwemizuzwana engu-9) kungavela ekunciphiseni kokuqina kwegazi, okubonisa ukuntuleka kwe-Vitamin K noma ukumuncwa kabi kwe-vithamini emathunjini ngenxa ye-dysbiosis ne-enterocolitis.
Ukusebenzisa kabi utshwala
Ukubhujiswa kwamangqamuzana abomvu egazi ngenxa yokuphatha ngokungakhathali kwe-tube yokuhlola enezinto ezibonakalayo,
Isampula yegazi leCapillary.
Ukushintshwa kwenkomba kuncike kuphi
I-PTI ukujwayelekile kwayo kuncike ezingeni le-prothrombin esegazini. Uma inkomba ingaphansi kokujwayelekile, kunengozi yokuthola ukopha kakhulu. Okuyingozi kakhulu ama-hemorrhages ebuchosheni kanye nasesiswini. Inkomba ye-prothrombin ingahle yehliswe ngezizathu ezilandelayo:
Ukushoda kweVitamin K
Ukuthatha izidakamizwa ezinamandla.
Ukwanda kwe-IPT kukhombisa ukushesha kwegazi okwenziwe ngejubane, okungadala ukwakheka kwezihibe zegazi, okungavimba ukuhamba kwegazi futhi kuholele kwimiphumela eyingozi. Inkomba ephakeme ye-prothrombin ingabangelwa yizizathu ezilandelayo:
Okuqukethwe okuphezulu kwamangqamuzana abomvu egazi.
Ukukhulelwa ku-trimester yesithathu.
Ukuthatha ezinye izidakamizwa ze-hormonal.
Namuhla, izindlela eziningana zisetshenziselwa ukunquma i-IPT. Lokhu kungathinta kabi ukutholwa, ngoba izinkomba zingahlukahluka ngokuya ngelebhu. Ukuhlaziywa kwegazi kwe-PTI decryption kufanele kwenziwe kuphela ngudokotela ohambelayo, ebheka zonke izinto ezingenzeka ezithinta inkomba.
Kwelinye izwe, azange basebenzise ama-biochemicals isikhathi eside, emazweni athuthukile benza olunye ucwaningo - INR. Lokhu kuhlaziya kunembe ngokwengeziwe futhi izinkomba zayo zinezindlela ezijwayelekile zokubalwa. Ngalesi sizathu, emitholampilo yanamuhla, esikhundleni se-IPT, ezweni lethu benza nocwaningo lwe-INR.
Izici zokuhlaziywa kwabesifazane
Odokotela banaka ngokukhethekile okuqukethwe kwe-prothrombin egazini labesifazane abaphethe ingane. Wonke umuntu wesifazane okhulelwe kufanele anikele ngegazi ku-IPT ukuze odokotela bakwazi ukubona izisu zabo ngendlela efanele ngesikhathi esifanele. Uma kutholakala izinto ezingahambi kahle, omama abakhulelwe banikezwa imishanguzo yokulungisa izidakamizwa.
Ngeshwa, omama abaningi abakhulelwe ababukeli ubufakazi bokuthi odokotela bayohlolwa. Bakholelwa ukuthi lezi zinkomba azibalulekanga ngokuphelele empilweni yabo, ngoba zizizwa zilungile. Kodwa-ke, izibalo zikhomba okuhlukile. Ngokwezibalo, abesifazane abayi-10% abangazange bahlolwe igazi nge-IPT, ngeshwa, bafa ngesikhathi sokuzalwa kwengane kusukela kwavula ngokungazelelwe ukopha kakhulu noma ngokuqhoboza ingubo yegazi efihlekile.
Lapho isifundo sidinga ukwenziwa njalo
Ukuhlolwa kwegazi kwe-PTI, njengomthetho, kunikezwa ngaphambi kokuhlinzwa nangesikhathi sokukhulelwa. Kodwa-ke, kuneziguli ezidinga ukuhlolwa njalo ukubheka ukusebenza kahle kwalapha. Lezi ziguli zibandakanya:
Iziguli ezifakwe ngenhliziyo.
Iziguli ezinesifo senhliziyo.
Iziguli zitholakala ukuthi zinesifo sokuqina kwezinzwa.
Abantu abanemithambo ye-varicose.
Kubaluleke kakhulu ukulawula izinga le-IPT emadodeni nakwabesifazane abadala kuneminyaka engama-50, ngoba yibo abangena eqenjini elibhekene nengozi yezifo zenhliziyo nezemithambo. Ukuxilongwa ngesikhathi kubantu asebekhulile kungasindisa impilo yomuntu.Namuhla, ama-70% abantu asebekhulile ezweni lethu babulawa ukuhlaselwa yinhliziyo nokushaywa unhlangothi. Futhi, inkomba ye-prothrombin kufanele ibhekwe njalo ezigulini ezinezifo ezilandelayo:
Isifo sokuqina kwesibindi.
Ukuphazamiseka kwengozi yokuqina kokuphefumula.
Isimo sokugoqeka kwangemuva kwesimo sokuhlasela kanye nesifo sokuwa ngemuva kokushaywa unhlangothi.
Ngaphezu kwalokho, ukuphathwa kwezinga le-PTI kwenziwa nge-hormonal ne-heparin therapy. Le mishanguzo ingathinta kakhulu ukuguquguquka. Ngokudla ngokungalawulwa kwale mishanguzo, ubeka impilo yakho engcupheni. Khumbula ukuthi noma yimuphi umuthi kufanele uphuzwe njengoba kuchazwe udokotela, yebo umuthi wendabuko.
Imithetho Yokuhambisa Ukuhlaziywa
Njengakho konke ukuhlolwa kwegazi, udinga ukuthatha lo msebenzi wokuhlolwa ekuseni ngesisu esingenalutho. Isonto ngaphambi kocingo, utshwala nokudla okunamafutha kufanele kungafakwa ekudleni. Itiye nekhofi akufanele kudliwe ngosuku lokuqoqa; ukubhema akunconywa imizuzu engama-30 ngaphambi kokuhlaziywa. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuzama ukukhipha izimo ezicindezelayo, awunakukhathazeka. Zonke lezi zinto zingathinta umphumela wokuhlaziywa. Uma uthathile noma yimuphi umuthi, noma ngisho netiye le-herbal, udinga ukwazisa udokotela wakho.
Uma kutholakala izinto ezingahambi kahle, kuzokwabelwa ezinye izivivinyo ukuze usize ekutholeni izimbangela zenkinga yokuqubuka kokubeletha. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukuphambuka kwenkomba ye-IPT akusona isifo esizimele, kodwa kuphela impendulo yomzimba yesifo esikhona. Kubaluleke kakhulu ukukhomba imbangela yokuphambuka bese uthola ukwelashwa okufanele. Udokotela kufanele achaze imiphumela yokuhlaziywa.
Igazi - into eyinkimbinkimbi equkethe ingxenye ye-liquid (i-plasma) namaseli, enza imisebenzi eminingi emzimbeni. Ukugcina lesi simiso sisesilinganisweni esiqhubekayo kungumsebenzi wokuqala, uma kungenjalo kuphazamiseka ngokushesha komsebenzi wazo zonke izitho zomzimba.
Isici esibalulekile segazi - ivolumu yayo engaguquki. Kwabesilisa, ngamalitha ama-5, kwabesifazane - amalitha ama-4. Ngokulimala, ngisho nezincane, ukulahleka ngokushesha kwaleli volumu kungenzeka, lapho uhlelo lokuqina lubambene. Ake sixoxe ngenkomba yekhono lwegazi lokujiya - inkomba ye-prothrombin.
Iprotheni eyenziwe kuma-hepatocytes wesibindi. Le nqubo ihlobene kakhulu nenani elanele lamavithamini. To . Lokhu kungokwesibili kwezinto eziyishumi nantathu zokuhlangana, ngaphandle kwalapho kungalingani phakathi kokuphuma kwegazi nokuma kwalo uma kulimala odongeni lwe-vascular akunakwenzeka.
Igama ngokwalo libonisa ukuthi i-prothrombin iyisandulelo se-thrombin. Yikamuva elibhekele ukwakhiwa kwengubo yegazi - ingubo yegazi.
Senziwa kanjani isifundo?
Ucwaningo lwe-prothrombin aluvamile njengokuhlola kwegazi okujwayelekile. Lokhu kungenxa yezindleko eziphakeme zama-reagents.
Akuvunyelwe ukubekelwa izivivinyo zokuvimbela, kuphela uma kunezimpawu ezicacile (zomtholampilo noma zelabhoratri). Ngokwezinga le-prothrombin, odokotela abahloli nje kuphela izinguquko ezinhlelweni zokuqina, kodwa nomsebenzi wesibindi.
Kunezindlela eziningana zokulinganisa izinga le-prothrombin esegazini:
Isikhathi se-Prothrombin - Isikhathi (ngemizuzwana) esidingwa yigazi ukusongelwa okuphelele.
I-Prothrombin Ngokushesha. Indlela ejwayelekile kakhulu yokutadisha. Isikhombi sinquma umsebenzi we-prothrombin ezintweni zokuhlola ngokuqhathaniswa nomuntu ophilile (%).
. Isilinganiso sesikhathi sokuhlangana esigulini ngenani elijwayelekile, elivezwe ngo-%.
INR - Isimo sengqondo samazwe omhlaba ejwayelekile. Ucwaningo olunconywe yi-WHO kuzo zonke iziguli eziphathwe ngama-anticoagulants. Ibalwa ngokuya ngefomula ekhethekile futhi ayixhomekeki kukhwalithi yama-reagents, eyenza inhloso ibe ngaphezulu.
Ukuhlaziywa okusheshayo namuhla kubhekwa njengokuphezulu, okunikeza isithombe esiphelele kakhulu sohlelo lokuhlangana kwabantu.Ingabekelwa nezinhloso zokuvimbela - kwabesifazane abaneminyaka engama-45-60 ukukhomba ukuthambekela kwe-thrombophlebitis.
Amanani ajwayelekile emiphumela yokuhlaziywa Okusheshayo awahlukile ngobulili. Kepha ngokuya ngeminyaka, kunokuthambekela okucacile kokukhulisa ukubopha okuphakeme kwesikhombisi. Sinikeza amanani asetafuleni.
Ukushintshashintsha okuncane kwamanani wokubala kungenzeka ngokuya ngeelebhu. Imingcele yesimo esivame ukukhonjiswa kwifomu lokuhlaziya. Isikhathi se-Prothrombin siyinkomba ezinzile kakhudlwana futhi sisuka kumasekhondi angu-9 kuye kwayi-12.
Muva nje, uhlelo lokuhlanganiswa kwegazi luhlolwe ngokuya nge-INR. Ukuchazwa kwalesi sikhombisi kuthebula.
Kuze kufike eminyakeni engu-16 ubudala, i-INR inamanani amahle kakhulu. Lesi sici siyabhekwa ngabantwana bezingane. Ngesikhathi sokukhulelwa, kusukela esontweni leshumi nantathu, i-INR ivame ukuncipha.
Izinto eziningi zingathonya imiphumela yocwaningo. Ake sixoxe ngezinye zazo.
Njengokuhlaziywa komtholampilo okujwayelekile, i-prothrombin iyahlolwa, imvamisa ekuseni.
Izinsuku eziningana, zenqaba ukudla okunamafutha (kuqukethe i-Vitamin K2) nokudla okune-Vitamin K1 (isibindi, iklabishi, isipinashi, izimbotshana, izigaxa, ama-radish, ama-radish, ama-turnips, amantongomane, amadevu, amaswidi, nokudla okulondoloziwe). Lolu hlu aluphelele, ngakho ulwazi luqhubeka licaciswe elebhu.
Noma ibuphi utshwala buholela ekubhujisweni kwe-Vitamin K, ngenxa yalokho, kuhlanekezela imiphumela yokuhlaziywa.
Ukuthembela kuthonywa kakhulu izidakamizwa eziningi (i-anticoagulants engaqondile, i-nicotinic acid, i-heparin, i-glucocorticosteroids, i-aspirin, ama-antihistamines, ama-anabolic steroid, ama-barbiturates, ama-contracepiment omlomo, i-caffeine nabanye).
Izithasiselo ze-Biological aqukethe izinto eziguqula umsebenzi we-prothrombin. Qinisekisa ukwazisa udokotela wakho ngokwakhiwa kwesengezo.
Ngokuqondile ngaphambi kokusampula kwegazi (kungakapheli amahora ayi-12), kuvunyelwe kuphela amanzi ajwayelekile.
Ihora ngaphambi kokufunda, yeka ukuthatha amanzi, uyeke ukubhema.
Umuntu kumele abe sesimweni esilinganiselayo. Ukucindezelwa nokuzivocavoca okwesikhashana kuphazamisa ukubumbana kwegazi okungokwemvelo.
Kuyelulekwa ngabesifazane ngesikhathi sokuya esikhathini noma esikhathini sokubeletha kokubeletha ukuthi ungabeki ucwaningo lwe-prothrombin.
Iziguli zinentshisekelo embuzweni wokuthi kusho ukwanda noma ukwehla komsebenzi we-prothrombin. Esimweni sokuqala (ukwanda), umuntu angacabanga ngokuthambekela kokukhuphuka kwe-thrombosis, okwesibili (ukuncipha) - ukwehla komsebenzi wokuqina kwegazi.
Kukhona nesici se-Vitamin K: uma kuningi kwayo - i-IPT inyuswa, ukushoda kokuqalwa kwayo esibindini (noma yiziphi izifo zemvelo yokuvuvukala noma isimila) kuholela ekunciphiseni kwe-IPT.
Isici esiyinhloko salesi simo i-hypovitaminosis K. Lokhu kwenzeka ezimeni ezinjalo:
I-pathology yesibindi: konke, i-cirrhosis, isimila, kufaka phakathi i-metastasis, ukuhlukunyezwa kwezitho zokuzala.
I-jaundice eyonakalisayo ebangelwa ukuvaleka ngokuphelele kwepheji le-biliary.
Ukuphazamiseka emgudwini wamaprotheni.
I-pancreatitis engapheli kanye nama-tumany e-pancreatic.
Izingane ezisanda kuzalwa lapho omama babenenkinga engapheli ye-Vitamin K emzimbeni.
I-DIC, isigaba se-hypocoagulation.
Izinhlobo ezinzima zokuhluleka kwenhliziyo.
Ukushaqeka okunobuthi obuthelelekayo.
Amanani we-IPT ancishisiwe abizwa ngokuthi yi-hypocoagulation. Ngasikhathi sinye, kukhuphuka inkomba ye-INR.
Ukuthi wenzeni nge-pathology ye-PTI
Ukwephulwa kohlelo lokuhlangana kwegazi yisimo esiyingozi esidinga ukubonisana nokwelashwa okuphoqelelwe ngochwepheshe. Lokho umuntu angakwenza ngokwakhe:
Bheka uhlobo lokuphuza. Ukusetshenziswa okukhulu koketshezi (amanzi, ujusi, iziphuzo zezithelo) kuholela ekunciphiseni kancane kwegazi kanye nokujwayelekile kokuqina kwalo.
Ukudla: kuyadingeka ukukhipha yonke imikhiqizo namakhambi athinta ukubumbana (ngaphezulu okungenhla ungangeza isinamoni, i-tansy, i-nettle, i-dieelle, i-yarrow, i-plantain).
Imvamisa, ngamanani aphezulu e-PTI, ama-anticoagulants ayadingeka, kepha ukuqokwa kwawo kufanele kuvunyelwane nodokotela, futhi ukwelashwa kuvame ukwenziwa esibhedlela.
Ngemuva kokuthi uthole umphumela wokuhlaziywa ngokuduka kwenkomba ye-prothrombin kusuka kokujwayelekile, musa ukujaha ukuthola iziphetho ezethusayo. Uchwepheshe onekhono kuphela okwazi ukuqonda zonke izinto eziyinkimbinkimbi zohlelo lokuguquguquka.
Udokotela unquma ukufundwa kwenkomba ye-prothrombin, eqondiswa yilezi zizathu ezilandelayo:
Noma yikuphi ukusola komtholampilo kwe-coagulation pathology (iziguli ezikhononda ngokuphuma njalo kwezinsini, ukwakheka okusheshayo kwamanxeba okuqhamuka emishinini emincane, nokushayeka kwezicubu zomzimba kanye nokuhlangana, ukopha okuhlala isikhathi eside kusuka emanxebeni nasekusikeni, abesifazane abanokopha isikhathi eside kokuya esikhathini).
I-Atherossteosis, ekhonjwe ngokomtholampilo futhi yaqinisekiswa izindlela zelebhu.
Izifo ezahlukahlukene zesibindi eziholela kokungahambi kahle kweprotheni, kufaka phakathi i-prothrombin.
I-Pathology yamasosha omzimba.
Abesifazane abanezisu eziqhubekayo eziphikelelayo.
Ukuhlolwa kokuhlola kohlelo lokuhlangana kwemikhakha ethile yeziguli.
Ukuxilongwa kokugcina kwenziwa kuphela ngesisekelo sokuhlolisisa okuphelele kohlelo lwe-coagulation, ngenxa yalokho, ngokuya ngamazinga wesimanje, ukuphambuka kuphela emsebenzini we-prothrombin noma isikhathi sokubumbana akubhekwa njengesiqinisekiso sokuxilongwa kokugcina.
Ukubukwa Okuthunyelwe: 2,153
I-Prothrombin Index (PTI) - esinye sezinkomba zokuhlolwa kwegazi okubonisa uhlelo lwe-he hetatic (), olwenzeka ngokuzibandakanya kwamaprotheni akhethekile, abizwa ngokuthi yizici zokuhlangana. I-Prothrombin protein, eyakheka esibindini ngosizo lwe-Vitamin K, isebenza kusebenze inqubo.
Umongo walolu cwaningo ungukunquma isikhathi sokuhlanganiswa kwegazi lomuntu othile, kanye ne-plasma ejwayelekile kanye nokuvezwa kwalesi silinganiso ngamaphesenti.
Izifundo zohlelo lwe-heestatic zibaluleke kakhulu ekutholakaleni kwezinhlobo ezihlukile zokuphuma kwegazi, ama-thromboemolic syndromes, izimo ezingama-thrombotic nezinqubo zokuqunjelwa kwegazi okubandakanyisiwe, kufaka phakathi izimo zokushaqeka.
Uhlelo lokuhlangana kwegazi ihlinzeka ukugcinwa kwegazi esimweni se-liquid, ngenkathi ihlanganyela ekunqandeni ukopha, kanye nesimo esijwayelekile sodonga lomkhumbi.
Inikezwa ngokusebenza kwezinhlelo ezimbili:okubabayo , okuwuchungechunge lokuphendula okuyinkimbinkimbi kusetshenziswa ama-enzyme phakathi kokugoqwa kwamaprotheni, futhi anticoagulant , okuthi, ngakolunye uhlangothi, angavumeli le nqubo ukuba ikhule futhi ivimbele ukwakheka kwamaqhubu futhi, ngenxa yalokho, ukushayisana kwegazi.
Ingxenye yohlelo lokuhlangana kukhona amaprotheni abizwa izinto zokubumbana . Babalwa ukusuka ku-1 kuye ku-12. I-Prothrombin iyinto ebaluleke kakhulu. Iprotheyini le iyinto engu-2. Yisandulela se-enzyme esebenzayo, i-thrombin.
Ngaphansi kwesenzo sayo, amafomu e-clot (ukufaka igazi) evala isilonda bese eyeka ukopha. Izinga layo elijwayelekile libonisa ukuthi umzimba uyakwazi ukubhekana ngokuphumelelayo nokuyeka okufika ngesikhathi kwegazi. Ngakho-ke, incazelo yale nkomba ibaluleke kakhulu.
Kafushane ngokujiya kwegazi
Kunomshini odingekayo wokumisa ukopha, noma kunalokho, ukwakha i-damu (i-heagasis ye-coagulation), okuhlose ukwakheka kwengxenye ebalulekile - i-fibrin.
Le ndlela inikezwe yizinto eziyi-12:
i-labile factor (proaccelirin),
i-proconvertin (isici esizinzile),
antihemophilic globulin A,
I-Christmas factor (i-plasma thromboplastin) - i-antihemophilic factor C. Izimisele ukuthola isifo esiyinkimbinkimbi - hemophilia.
Isici se-Hagen (isici sokuxhumana),
Ngokuhlolwa kwelebhu kweleveli yohlelo lwe-coagulation, kuyisiko ukunquma isici sesibili - prothrombin.
Uhlelo lokuhlangana emzimbeni womuntu lusebenza ngokuthembekile kakhulu. Ngakho-ke, lapho kuhlangana igazi eli-10 ml, kwakheka amayunithi angama-300 e-thrombin, anele ukuhlanganisa amalitha ama-5 egazi.
Imisebenzi yayo yile:
Ukuvinjwa kokusebenza kwezinto zokuqina,
ukungathathi hlangothi nokuvinjwa kwezinto ezisebenzayo zokuhlangana,
i-lysis (i-cleavage) ye-fibrin, eyakhiwa lapho kuhlangana khona.
Uhlelo lwe-Anticoagulant lubandakanya izinto ezenziwe ngokwenziwa ngofuzo, kanye nezakhi zomzimba ezakhiwa phakathi nenqubo yokuhlangana nokuqina kwe-fibrinolysis yezinto zokuqina, umsebenzi walezi zinto ukukhipha amandla nokuvimbela izinto ezisebenzayo zokuhlangana. Ama-anticoagulants angaba ngamaprotheni, ama-lipids.
Indlela yokusebenza isebenza ihlukaniswe:
Ukuhlola uhlelo oluphakeme kakhulu kuyadingeka ukunquma womsebenzi kanye nenombolo yezakhi zamaselula kanye ne-plasma yalesi simiso egazini elijikelezayo.
Ngasikhathi sinye, ukwehla komsebenzi (umsebenzi) zezingxenye ezingenhla, okuncike kwizizathu eziningi, zingadala ukubonakaliswa kwemitholampilo (i-thrombosis noma ukopha), kwesinye isikhathi ngisho nokuphikisana nesizinda sokuntuleka kwamanani amaningi (ukuphazamiseka komkhiqizo noma ukuncipha - nge-DIC).
Ukuxilongwa okunembile kokuphazamiseka kunquma amaqhinga wokwelapha okulungayo . Kulokhu, isidingo sokusetshenziswa kwemithi yemithi okuhloswe ngayo ukuvuselela noma okuphambene nalokho ukuthintela kwemisebenzi engasebenzi sinqunywa. Ukuphinda futhi kususwe inani elingakanani kungenzeka ngokufaka esikhundleni sezidakamizwa noma izingxenye zegazi.
Ngabe inkomba inqunywa kanjani?
Ukuhlolwa, kufanele uphumelele ukuhlolwa kwegazi kusuka kumthambo.
Kunezindlela ezimbili zokunquma i-IPT: Ukuhlolwa okusheshayo nokuhlolwa kwelebhu ejwayelekile.
Ukuhlolwa kwe-Prothrombin okusheshayo ifaka inqubo yokuqunjelwa kwegazi, okwenza sikwazi ukuhlola umsebenzi we-prothrombin kanye ne-accelerators yokuguqulwa kwayo - izici zephrothrombin eyinkimbinkimbi nezinto ezifana ne-heparin. Umsebenzi wezinto zokuphamba kweprothrombin uvezwa njengephesenti, ukuguquguquka okujwayelekile kuvumelana ne-80-100%.
Inkomba ye-Prothrombin nesikhathi - imingcele eyinhloko enqunywe.
Ngakho-ke, ngokusho kweShesha, i-PTI isuka ku-78 iye ku-142%, nangezinye izindlela ukusuka ku-95 iye ku-100%. Izibalo ezitholakele zokuhlaziywa zithintwa yinkomba efana nobudala bomuntu.
Izinguquko ohlelweni olusezingeni eliphakeme ngezikhathi ezahlukahlukene zobudala:
Ezisanda kuzalwa ukuhamba kancane kwegazi. Lokhu kukhulunywa kakhulu ngosuku lwesibili lokuphila. Okuqukethwe okuphansi okusegazini zezinto ezibalulekile zokuhlanganiswa kwegazi kunqunywa ngezinga elikhulu ngokusebenza kokuqina kokuqina kwesibindi, ukwakheka okunganele kwe-Vitamin K okwenziwa yi-microflora yekoloni.
Kuwo wonke unyaka wokuqala wokuphila ukuqoqwa kwamaqiniso athile egazini kuyakhuphuka, kepha kufinyelela ezingeni lomuntu omdala kuphela ngesikhathi sokufikisa.
Ebantu abadala ukuqina kwegazi kufanele kulindeleke (lokhu kungenxa yokwanda kwenani lamapuleti, ukwanda kokunamathela kwawo).
Kuvunyelwa nini ukuhlolwa kwenkomba ye-prothrombin?
ISIBONELELO SOMBUZO WETHU!
Kunezimo lapho incazelo yodwa yale nkomba inganele ukuthola ukuxilongwa noma ukunquma umuthi owanele.
Ezimweni ezinjalo, acatshangelwa ngokuhambisana nezinye izinkomba zohlelo lwegazi lokujiya, okungukuthi:
Kunezimo eziningana zomzimba lapho izinga le-PTI lingashintshashintsha.Ngokuya ngezinga: ngamanani andayo we-IPT noma ancishisiwe, umuntu angahlulela ubukhona be-pathology efana ne-hyper- and hypocoagulation.
Isimo esifana ne-hypercoagulation, noma uphawu lokunyuka kwegazi kungabangelwa yizici:
i-vitamin K ethe xaxa emzimbeni (ngoba le vithamini iyadingeka ekwakhiweni kwe-prothrombin),
ama-neoplasms amabi, izinhlobo ezahlukahlukene zenqubo yamathumbu,
ezigulini ngemuva kokufakelwa kwe-myocardial, kanye nokwenza i-coronary artery bypass grafting,
esikhathini sokusebenza ngemuva kokuhlinzwa kwenhliziyo, ukushintshwa kwe-valve,
ezigulini ezine-fibrillation ye-atrial ende futhi zingathathi ama-antiplatelet agents,
ukwanda ngokomzimba kuyabonakala kwabesifazane abakhulelwe (ikakhulukazi ku-trimester yokugcina),
ngesinye isikhathi lapho usebenzisa izithiyo zokuvimbela inzalo zama-hormonal, izidakamizwa ze-steroid, ama-hormone adrenal,
ngezinkinga ze-thromboembolic, i-venous thrombosis,
ngenkambo engapheli yemithambo ye-varicose.
Ehla izinga le-prothrombin (ukukhohlisa ) ayithathwa njengento enhle ethile ye-proology.
izinqubo zokuvuvukala okunamandla kwesibindi - i-hepatitis,
ukulimala kwenhlangano yokwakheka kwesibindi (i-sclerosis, fibrosis, cirrhosis),
ukusetshenziswa kwezidakamizwa ze-anticoagulant (warfarin, aspirin),
Ukushoda kweVitamin K (ngokubhekene nesizinda se-dysbiosis noma izifo zegciwane lesisu, lapho ukumunyazwa kuphazamiseka),
ukuntuleka kwe-fibrinogen esebenzayo.
Yini okufanele uyenze nge-IPT ephakeme?
Kulesi simo, kunethuba lokopha, ngoba ngaphandle kwesamba esidingekayo se-prothrombin factor, i-coagulation ngeke isebenze, njengoba kuboniswe ukwephulwa komdlalo oshayelayo wokuphendula.
Abantu abanjalo kufanele nakanjani babonane nodokotela mayelana nemvamisa yokuqapha i-IPT, ikakhulukazi uma kune-comorbidity enkulu.
Kuyadingeka ukuthatha imishanguzo uma kudingeka ukungenelela kokuhlinzwa, noma ngabe ukuhlinzwa esiswini noma ukungenelela kwezimonyo okuncane. Qiniseka ukuthi uxwayisa udokotela ngesimo sokuhlolwa lapho uvakashela udokotela wamazinyo, ngoba ukukhishwa ngamazinyo kungadala ukopha kakhulu isikhathi eside.
Ungakuhlola kanjani igazi kwe-PTI
Ukuthola imiphumela yocwaningo olunembile, kumele kulandelwe imithetho eminingana. Ukuhlolwa kwenziwa ngesisu esingenalutho, engxenyeni yokuqala yosuku. Kuvunyelwe ukuphuza izingcezwana ezimbalwa zamanzi. Kunconywa ngosuku olwandulelayo, endaweni ethile emahoreni angama-24 ukwenqaba ukusetshenziswa kwamafutha, okuthosiwe, ukudla okubhemayo kanye neziphuzo zotshwala.
Ungayithoba kanjani inkomba ye-prothrombin?
Into yokuqala okufanele yenziwe ukubonisana nesazi se-hematologist ngokuvakashela isikhungo esikhethekile. Imakethe yezemithi imelela inqwaba yezidakamizwa yokulungiswa kohlelo lwe-heestatic. Noma kunjalo, kubalulekile ukukhetha umthamo ofanele, futhi udinga ukuphinda uhlaziyo ngesikhathi esithile futhi, kuye ngemiphumela, uguqule umthamo womuthi.
Indlela yokuthola i-IPT
Igazi lizogcwala ngokujwayelekile uma i-prothrombin, iphrotheni eyenziwe amaseli wesibindi, ibandakanyeka ngokuqinile. Ukuze into ikhiqizwe ngamanani anele, kuyadingeka ukuthi kube nezinto eziningi zokulandela, ikakhulukazi i-Vitamin K. Kungakho, ngokuntuleka kwalesi vithamini, ama-molecule avela akha izingxenyana zegazi.
I-Prothrombin isebenzisana ekusungulweni kokuhlanganiswa kwezicubu ze-liquid. Ngokunquma inombolo ye-prothrombin, okuyisinkomba yokwanda kwegazi, ungathola ukuthi ukhona kwesifo. Ukunquma i-prothrombin, kunezinhlobo ezahlukene zezifundo.
Ikakhulu, ukubalwa kuyenziwa:
PTI Ngokushesha. Le ndlela yokucwaninga ibhekwa njengeyinembe kunazo zonke. Kuyasiza ukubona isilinganiso somsebenzi wamaprotheni. Ukuhlaziywa kunikeza ukuhlolwa kwesilinganiso senkomba ye-plasma yesiguli kwisampula yokulawula. I-PTI ibalwa njengephesenti.
Isikhathi se-Prothrombin. Okusho ukuthi, kusungulwa isikhathi esingakanani igazi lihlangana.
Inkomba ye-Prothrombin - isilinganiso sesikhathi se-prothrombin, okujwayelekile, kudatha yesihloko.
Inkomba ye-Prothrombin INR. Ngosizo lohlolo olunjalo, ukwelashwa kweziguli ezinqunywe ngokungaqondile ama-anticoagulants, izidakamizwa ezinciphisa inqubo yokugoqwa futhi zinciphise amazinga wamaprotheni, kubhekwe.
Izinkomba ze-IPT nezinkomba zokuhlola
Isabelo sokuhlaziya kungenzeka uma:
isiguli sinezinkinga zokuphuma kwegazi isikhathi eside, okuwumphumela wokuqina kwegazi okungekuhle,
kukhona ukwehla kokusebenza kwesibindi nama-enzyme ayo,
udokotela usola ukuthuthukiswa komdlavuza wegazi,
kuyadingeka ukulawula izinga lokuqina ngesikhathi sokwelashwa ngama-anticoagulants.
Kuphoqelekile ukuthi abesifazane abakhulelwe badlulise i-coagulogram ukuze bakhombe ngaphambi kwesikhathi, isibonelo, ukwehla kwenkomba ye-prothrombin.
Abesifazane abaneminyaka engama-45 ubudala nabo bathunyelwa ukuba bahlaziywe, ngoba ngenxa yokuguqulwa kwesizinda se-hormonal, izinguquko zenzeka ku:
ukwakheka kwayo - kuyalingana futhi kuyafaneleka.
Kwilabhoratri ngayinye, imininingwane izokhishwa ngezindlela ezihlukile.
Izindinganiso ezibekwe ngawodwana.
Izinga lama-reagents asetshenzisiwe kanye nezinga lezinto zokwenza izinto zibe zintsha.
Izici zomlando wale ndaba.
Kwabesilisa nabesifazane, inkomba ejwayelekile ingu-% (uma kusetshenziswa inqubo esheshayo). Lapho imiphumela ikhombisa i-IPT engaphansi kuka-77%, lokhu kubonisa ukuthi isiguli sinenkomba ephansi ye-prothrombin. Uma idlula i-120%, khona-ke inkomba iyakhuphuka.
I-IPT, ikakhulu, kuya ngokuthi kukhona kwe-pathology emzimbeni. Ubulili abudlali indima ekhethekile. Okunye ukuthi uma owesifazane esesikhundleni.
Ukubaluleka kokuthola i-IPT ngesikhathi sokukhulelwa
Noma yimuphi umuntu wesifazane ophethe umntwana ubelwa i-coagulogram, ngosizo lapho kusungulwa inani lenkomba ye-prothrombin. Lokhu kuyadingeka ukuze ugweme ukulahleka kakhulu kwegazi ngesikhathi sokubeletha noma ukuvimbela i-thrombosis.
Izinga le-PTI elisungulwe komama abakhulelwe% Lapho i-PTI incipha, uma idatha ikhombisa ama-80% noma ngaphansi, kunosongo olukhulu lokopha. Kulokhu, kuhlanganiswa ama-coagulants. Ngakho-ke, uma i-coefficient inyuke, uzodinga izidakamizwa ezingasetshenziswa ukuqeda ukwanda kwegazi okwandayo.
Kuyadingeka futhi ukunquma isikhathi se-prothrombin. Kungani lokhu kubalulekile?
Lapho udokotela esazi ukuthi yisiphi isikhathi igazi elihlangana ngalo kowesifazane obelethayo, kuzokwazi ukugwema lokhu:
ukuvela kokushaqeka kwe-hemolytic, okuwumphumela wokulahleka kwegazi okunzima futhi ngenxa yokuthi abesifazane lapho bebeletha bavame ukufa.
Abanye besifazane abakhulelwe benqaba ukulandela izincomo zokwelashwa, beqiniseka ukuthi ukulethwa kwezivivinyo ngobuningi babo kuyithinta kabi impilo yabo. Kodwa-ke, ngaphandle kolwazi ngenani le-IPT, udokotela ngeke akwazi ukunikeza usizo ngesikhathi esifanele. Uma inkomba yehlisiwe, i-placenta ingahle ikhuphuke noma i-hemorrhages yangemva kokubeletha iqale. I-Placental vascular thrombosis ayibandakanywa ngokunyuka kwezinkomba.
Kungani inkomba iyehla?
Ukuhlola kuyenziwa futhi ukuze kuqinisekiswe noma kungabandakanywa ukuphambuka kokujwayelekile. Ngokwemvelo, lapho i-IPT iguquliwe, khona-ke kunezizathu ezidinga ukusungulwa. Ngemuva kokuhlaziywa, isiguli sinikezwa umphumela ngendlela yetafula, lapho kuboniswa khona inani lezinkomba, kanye nesici esinciphayo, ngenxa yalolo shintsho olwenzeka ngalo.
I-IPT izokwehliswa lapho:
ukuntuleka kwe-prothrombin yemvelo yokuzalwa noma ukutholwa,
ukungasebenzi kahle kwesibindi namanyikwe,
ukusetshenziswa kwezidakamizwa esikhathini eside ezithinta izinga lokugcwala kwegazi.
Ukwehla kwenkomba kungacatshangelwa yizimpawu ezibonisa izinkinga ngesibindi kanye ne-emathunjini.
Kepha isibonakaliso esiyinhloko nesiyingozi kakhulu ukopha okusindayo, noma ukusika okuncane. I-abrasion ejwayelekile esinqeni ene-IPI ephansi ingaholela ekulahlekelweni kwegazi okungaba ngama-300 ml.
Akufanele wenqabele ukuvivinywa, ngoba ngale ndlela kuphela lapho ungabona khona ukwephulwa komzimba ngesikhathi. Omama besikhathi esizayo kufanele balalelisise isimo sabo, ngoba hhayi impilo yabo kuphela, kepha futhi nempilo yengane, okufanele izalwe, kuya ngezenzo zabo.
Lithini inani le-prothrombin index (PTI) yabesifazane?
Inkomba ye-prothrombin (PTI) ingenye yezinkomba zokuhlolwa kwegazi okubonisa uhlelo lwe-hemostatic (i-igazi coagulation), olwenzeka ngokubamba iqhaza kwamaprotheni abalulekile abizwa ngokuthi ama-coagulation factor. I-Prothrombin protein, eyakheka esibindini ngosizo lwe-Vitamin K, isebenza kusebenze inqubo.
Yini enye oyinaka lapho uhlaziya i-IPT?
isikhathi sokuhlangana (nge-Li-white),
isikhathi sokuvuselelwa kwe-plasma,
ukuzimisela kwesikhathi se-prothrombin,
ukubekezelelwa kwe-plasma ku-heparin,
Yini okufanele uyenze nge-IPT encishisiwe?
Ngakho-ke, inani lenkomba ye-prothrombin (PTI) liyatholwa. Ngenxa yethonya lezinto ezithile, izinkomba zingancipha noma zande, okukhombisa ubungozi obukhulu empilweni.
PTI Ngokushesha. Le ndlela yokucwaninga ibhekwa njengeyinembe kunazo zonke. Kuyasiza ukubona isilinganiso somsebenzi wamaprotheni. Ukuhlaziywa kunikeza ukuhlolwa kwesilinganiso senkomba ye-plasma yesiguli kwisampula yokulawula.I-PTI ibalwa njengephesenti.
Ukunquma izinga le-prothrombin ngukuhlola okubaluleke kakhulu ekwakhekeni kwe-heestasiogram.
I-Prothrombin Ngokushesha. Namuhla, le ndlela iyamukelwa ngokuvamile futhi ivamile. Le ndlela ihlinzeka ngokubalwa kwezinga lezinto njengephesenti lemali evunyelwe. Amanani alandelayo abhekwa njengezinga eliphezulu (%):
Inkomba ye-Prothrombin - nayo inqunywe njengephesenti. Inkomba ejwayelekile ikule mikhawulo (%):
Imiphumela yokuhlolwa okubili okushiwo ngenhla ingahle ihlangane uma i-prothrombin ivamile. Kepha uma inani layo liphansi kunele, lihlukahluka kakhulu.Inkomba incike kakhulu ekuzwisaneni kwamakhemikhali asetshenziswa kuhlolo.
Isikhathi se-Prothrombin - sibonisa ukuthi ingamaphesenti amangaki i-plasma ihlangana emva kokufaka ingxube ekhethekile kuyo.
Isimo sengqondo esijwayelekile samazwe omhlaba - INR. Le ndlela iyakhethwa futhi isetshenziselwa ukulawula imiphumela yokuhlolwa kwe-prothrombin.
Izifundo zohlelo lwe-heestasis lubaluleke kakhulu ekutholakaleni kwezinhlobo ezahlukahlukene zokuphuma kwegazi, i-thromboembolic syndromes, izimo ezingama-thrombotic nezinqubo zokuchithwa kwegazi okubandayo, kufaka phakathi izimo zokushaqeka.
Uhlelo lwegazi lokuqinisa igazi luqinisekisa ukugcinwa kwegazi esimweni sewuketshezi, ngenkathi lihlanganyela ekunqandeni ukopha, kanye nesimo esijwayelekile sodonga lomkhumbi.
Kunikezwa ngokusebenza kwezinhlelo ezimbili: okubumbene, okubonisa uchungechunge lokuphendula okuyinkimbinkimbi ngama-enzyme phakathi kwezinto ezigoqwa amaprotheni, kanye ne-anticoagulant, okuthi, kunalokho, kuvimbele le nqubo ekuthuthukiseni nasekuvimbeleni ukwakheka kweziqubu futhi, ngenxa yalokho, ukushayisana kwegazi.
Ingxenye yohlelo lokuhlangana ngamaprotheni, abizwa ngokuthi yizici zegazi. Babalwa ukusuka ku-1 kuye ku-12. I-Prothrombin iyinto ebaluleke kakhulu. Iprotheyini le iyinto engu-2. Yisandulela se-enzyme esebenzayo, i-thrombin.
Ngesenzo sayo, amafomu e-clot (thrombus), avale isilonda bese eyeka ukopha. Izinga layo elijwayelekile libonisa ukuthi umzimba uyakwazi ukubhekana ngokuphumelelayo nokuyeka okufika ngesikhathi kwegazi. Ngakho-ke, incazelo yale nkomba ibaluleke kakhulu.
Ukuhlolwa kwelebhu kweleveli yohlelo lwe-coagulation, kuyisiko ukunquma isici sesibili, i-prothrombin.
Ukuhlola uhlelo lwe-heestatic, kuyadingeka ukuthola ukuthi yini umsebenzi kanye nenombolo yezakhi zamaselula kanye neplasma yalesi simiso egazini elijikelezayo.
Ngasikhathi sinye, ukwehla komsebenzi (umsebenzi) walezi zingxenye ezingenhla, okuncike kwizizathu eziningi, kungadala ukubonakaliswa kwemitholampilo (i-thrombosis noma ukopha), kwesinye isikhathi ngisho nokuphikisana nesizinda sokuntuleka kwamanani wokuphazamiseka (ukuphazamiseka kokukhiqiza noma ukuncipha - nge-DIC).
Ukuxilongwa okunembile kokuphazamiseka kunquma amaqhinga wokwelapha okulungayo. Kulokhu, isidingo sokusetshenziswa kwemithi yemithi okuhloswe ngayo ukuvuselela noma okuphambene nalokho ukuthintela kwemisebenzi engasebenzi sinqunywa. Ukuphinda futhi kususwe inani elingakanani kungenzeka ngokufaka esikhundleni sezidakamizwa noma izingxenye zegazi.
Ukuhlolwa kwe-Prothrombin Quik kufaka inqubo yokujiya kwegazi, okwenza sikwazi ukuhlola umsebenzi we-prothrombin kanye ne-accelerators yayo yokuguqula - izici zezinto eziyinkimbinkimbi ze-prothrombin kanye nezinto ezifana ne-heparin. Umsebenzi wezinto zokuphamba kwe-prothrbin uvezwa njengephesenti, ukushintshashintsha okujwayelekile kufana%.
Inkomba nesikhathi se-prothrombin isikhathi ngamapharamitha ayinhloko, anqunyelwe.
Ezinganeni ezisanda kuzalwa, ukuhamba kwegazi kuhamba kancane. Lokhu kukhulunywa kakhulu ngosuku lwesibili lokuphila. Okuqukethwe okuphansi okusegazini zezinto ezibalulekile zokuhlanganiswa kwegazi kunqunywa ngezinga elikhulu ngokusebenza kokuqina kokuqina kwesibindi, ukwakheka okunganele kwe-Vitamin K okwenziwa yi-microflora yekoloni.
Ngonyaka wokuqala wokuphila, ukuqoqwa kwamaqiniso athile egazini kuyakhuphuka, kepha kufinyelela ezingeni lomuntu omdala kuphela ngesikhathi sokufikisa.
Kubantu asebekhulile, ukuqina kwegazi kufanele kulindelwe (lokhu kungenxa yokwanda kwenani lamapuleti, ukwanda kokunamathela kwabo).
Uma kukhona noma yikuphi ukopha, ukulimala okungapheli noma ukulimala ngaphandle kwesizathu,
Ucwaningo olusebenzayo olusebenzayo,
Ukuhlola isimo sohlelo lokuqubuka futhi,
Ngokutholwa kwezifo zegazi kusenesikhathi,
Uma umdlavuza usolwa,
Ukubheka ukwelashwa kwesikhathi eside ngama-anticoagulants angaqondile njenge-warfarin,
Ukuhlola isimo sokusebenza kwesibindi,
Ukunquma ukuba khona kwe-DIC.
Muva nje, ngifunde i-athikili ekhuluma ngetiye leMonical ekwelapheni izifo zenhliziyo. Usebenzisa leli teyi, ungahlala ulapha i-arrhythmia, ukwehluleka kwenhliziyo, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, isifo senhliziyo, isifo se-myocardial nezinye izifo eziningi zenhliziyo nemithambo yegazi ekhaya. Azange ngisetshenziselwe ukwethemba noma yiluphi ulwazi, kepha nginqume ukubheka futhi ngayala isikhwama.
Ukusebenza okujwayelekile kwabesifazane
Kwabesifazane, isilinganiso senkomba ye-prothrombin siyefana nakwabesilisa futhi yi-%. Okuhlukile isikhathi sokukhulelwa, ikakhulukazi i-trimester yokugcina, lapho izinga lenkomba landa. Izinga le-% ngesikhathi sokukhulelwa kuthathwa njengokujwayelekile.
Ngasikhathi sinye, kuyadingeka ukuqapha uhlelo lokuqunjelwa kwegazi, ukuthatha uhlolo lwe-coagulogram, ngoba kubaluleke kakhulu ukunquma isimo segazi, silungiselela ukuzalwa kwengane. Ukuhlola enye yezinkomba, njenge-PTI, singabikezela ubungozi bezinkinga ngesikhathi sokuzalwa kwengane noma ngemuva, okungukuthi amathuba wokopha.
Ukutholwa kusenesikhathi kokubonakala okunjalo kwenza ukuthi kuvikeleke ukukhula kwesimo se-pathological ngokusebenzisa izidakamizwa ezithile, iphuzu lokusebenzisa ngalo okuwumphumela ohlelweni lokuqina.
Kunezimo eziningana zomzimba lapho izinga le-PTI lingashintshashintsha. Ngokuya ngezinga: ngamanani andayo we-IPT noma ancishisiwe, umuntu angahlulela ubukhona be-pathology efana ne-hyper- and hypocoagulation.
Ukwehla kwezinga le-prothrombin (hypocoagulation) akubhekwanga njengento enhle ethile ye-Progrogin.
Into yokuqala okufanele yenziwe ukubonisana nesazi se-hematologist ngokuvakashela isikhungo esikhethekile. Imakethe yezemithi imelela inqwaba yezidakamizwa yokulungiswa kohlelo lwe-heestatic.Noma kunjalo, kubalulekile ukukhetha umthamo ofanele, futhi udinga ukuphinda uhlaziyo ngesikhathi esithile futhi, kuye ngemiphumela, uguqule umthamo womuthi.
Lesi simo sibonakaliswa ngamathuba aphezulu we-thrombosis, futhi, ngenxa yalokho, ngokuqhekeka kwemikhumbi emikhulu, egcwele izingqinamba ze-thromboembolic. Ingabonakala ngentuthuko yokuqala ye-vein thrombosis yomlenze, nge-polycythemia, ku-trimester yokugcina yokukhulelwa.
Ngaphezu kwalokho, izinguquko esimweni esejwayelekile zingathathelwa indawo ngokwazo. Izikhalazo ezinjalo zivame ukubhekiswa kumelaphi, obeka iqoqo lokuhlolwa, kufaka phakathi isifundo se-IPT. Ukukhathazeka nge-malaise, ubuthakathaka, ikhanda elihlala likhona, isiyezi, ukusebenza okunciphile, ukuhlangana okungahambi kahle.
Noma kunjalo, izimo ezinjalo zingavela ngaphandle kwale mizwa. Imvamisa ukukhonjwa kokuphambuka kwenzeka ngengozi, lapho uvakashela udokotela ngezindleko ze-pathology ezihlukile.
Ukusetshenziswa kwama-anticoagulants - ama-thiners egazi, kusiza ukwandisa inkomba ye-prothrombin. Basiza ukulawula ukulingana phakathi kohlelo lokuhlangana kwegazi ne-anticoagulant. Ukusebenza ngempumelelo kuleli cala kuzoba umuthi wendabuko. Ama-decoctions azosiza leyo mpi ngegazi "eliminyene".
Ukubambisana, thintana nge-imeyili:
Imininingwane ekulesi siza ihlinzekelwe imininingwane yolwazi kuphela. Ngaphambi kokuthatha noma yisiphi isinqumo, bonana nodokotela wakho. Ukuphathwa kweKardioHelp.com akunasibopho sokusetshenziswa kolwazi oluthunyelwe esizeni.
Ukukopisha izinto kungenzeka kuphela ngesixhumanisi esisebenzayo esizeni.
Ukuhlolwa kwegazi kwegazi kungukutadisha okubaluleke okufanele okusiza ukuthola imbangela yezifo ezithile ezingathi sína. Kuyasiza ukuvikela i-thrombosis noma ukopha ngesikhathi.
I-PTI (inkomba ye-prothrombin) - yini? Ngesikhathi sokufunda, ekuhlolweni kwegazi, unganquma ukuthi i-plasma yomuntu othile ihlangana isikhathi esingakanani, bese uqhathanisa inani nezindlela ezisetshenzisiwe. Isilinganiso salo mehluko siguqulwa sibe ngamaphesenti . Isimo esivumelekile egazini ngu-78-142%, inkomba ye-prothrombin ngokusho okusheshayo - 95-105%.
I-Prothrombin iprotheni engumbanduleli we-thrombin. Futhi i-thrombin, nayo idlala indima ebalulekile ku-thrombosis. IProthrombin ikhiqizwa esibindini. IVitamin K inomthelela kulokhu.Uma uvithamini K enganele, ukopha kungadalwa ngenxa yokwehla kwenani le-prothrombin.
Ukuhlaziya kwenziwa nini
Kuyadingeka ezimweni ezilandelayo:
ezigulini ezisebenzisa ama-anticoagulants ukuvimbela i-thrombosis,
iziguli ezikhohlisayo ngemithambo ye-varicose,
kubantu abanenkinga yokuphazamiseka kohlelo lwezinhliziyo,
nokukhubazeka kuka-Vitamin K,
Ochwepheshe abalandelayo banganikeza ukuhlaziywa okunjalo:
Izizathu zeleveli ephansi:
Amaphesenti andisiwe ngenxa ye:
Izinkinga zokuqina kwensimbi.
Ukusetshenziswa kwemithi elwa namagciwane.
Okujwayelekile kwabesifazane abakhulelwe
Inkomba ye-prothrombin ngesikhathi sokukhulelwa inyuka ibe yinkomba ye-90-120%. Lokhu kungabangelwa ushintsho lwamahomoni emzimbeni wowesifazane okhulelwe.
Ukuhlaziywa kwe-IPT, ikakhulukazi ngesikhathi sokukhulelwa, kubalulekile amahlandla amabili kuya kwamane. Ukugcizelela okukhulu kufanele kubekwe kukho ku-trimester yokugcina, ngoba kuncane kakhulu isikhathi esisele ngaphambi kokuzalwa kwengane futhi kuyadingeka ukulandela amandla.
Lapho amaphesenti ekhuphuka aze afinyelela ku-150, angaba usongo lokutholwa kwe-placenta. Lapho isilinganiso sehlela ngaphansi kwama-90%, ukopha okunzima kungalindeleka ngesikhathi sokubeletha noma ngemuva kokubeletha.
Uma owesifazane okhulelwe ekhombisa ukungasebenzi kahle enkombeni yamaphesenti, ungakhathali ukuqapha kweziguli esibhedlela sabahlengikazi. Kubalulekile ukuthi umama okhulelwe abe ngaphansi kokuqashwa ochwepheshe.
Ukuhlaziywa okusheshayo kwenzelwa izifundo ezengeziwe zepheshana lesisu, kanye nesibindi.
Ukuhlaziywa okusheshayo kwenziwa emacaleni alandelayo:
Lapho ukubumbana kuphukile.
Kukhona ukugula okuhambisana nesibindi.
Kunenqubo yokwanda kwe-thrombosis.
Njengoba unesifo esifana nomdlavuza wegazi.
Ezimweni zokuntuleka kwe-Vitamin K
Imiphi imikhawulo eyamukelekayo:
Kuze kube yiminyaka engu-6 - 80-100.
Kusuka ku-6 kuye ku-12 - 79-102.
Kusuka ku-12 kuye ku-18 - 78-110.
Kusuka ku-18 kuye ku-25 - 82-115.
Kusuka ku-25 kuye ku-45 - 78-135.
Kusuka ku-45 kuye ku-65 - 78-142.
Okujwayelekile kwabesifazane nokujwayelekile kwabesilisa kuyafana kungakhathalekile iminyaka yobudala.
Isikhathi se-Prothrombin siyinkomba ekhombisa imizuzwana lapho i-plasma ihlangana khona ngemuva kokungeza ingxube edingekayo kuyo.
Ezinganeni, ikakhulukazi ezisanda kuzalwa, lesi sibalo yimizuzwana eyi-14-18.
Kwabadala, inani elijwayelekile lingama-10-15. Inani elifanelekile lesikhathi se-prothrombin lisukela kumasekhondi angu-9-12.
INR - isimo esijwayelekile samazwe omhlaba
I-INR indlela ekhethekile esetshenziselwa ukulawula umphumela wokugcina wokuhlolwa kwe-prothrombin. Ukusetshenziswa kwale ndlela kunconywe ngokuqinile ngabameli bezinhlangano zezempilo zomhlaba wonke.
Ngenxa yemiphumela etholwa uchwepheshe ngemuva kwalolu cwaningo, angakwazi ukulandelela ukuthi lusebenza ngempumelelo kanjani usizo olunikezwa ngabenzi bezokwenziwa.
Uma sikhuluma ngokwelashwa noma ukuvimbela i-venous thrombosis, izifo zamaphaphu noma i-deformation of valves yenhliziyo, khona-ke inqubo ye-INR ingafinyelela ku-3.0.
Ukuthi wenzeni ngamanani anyukayo we-prothrombin
Ungayinciphisa kanjani i-prothrombin? Lesi sigaba sabantu sidinga ukulandela indlela ethile yokudla nendlela yokuphila.
Udinga ukudla ukudla okuningi ngangokunokwenzeka okunomthelela ekunciphiseni kwegazi. Kubalulekile ukuqonda ukuthi kunokudla okuningana okungaholela ekuqineni kwegazi.
Uhlu lwezithako ezibalulekile ukwehlisa amazinga we-prothrombin:
Wonke umuntu uyazi i-oatmeal. I-Oatmeal ayisizi nje kuphela ukuzinzisa ukugaya, kepha futhi ivimbela ukuqina kwegazi. Ngokufanelekile, kufanele udle lesi sidlo njengesidlo sasekuseni. Uma ufisa, ungangezela iphalishi ngamajikijolo amasha.
Ijusi katamatisi, ikakhulukazi uma ilungiswa kusuka kwimifino entsha ngokwakho. Abaningi benza iphutha elikhulu ngokufaka usawoti kulamula.
IBeetroot iyimifino efanelekayo esiza ama-prothrombin aphansi.
Ukudla okunjani ngaphandle kwejinja! Kungezwe itiye. Izimpande ze-ginger zinciphisa igazi, ziphikisana nokwakheka kweziqeshana zegazi.
Amafutha efilakisi, umnqumo.
Amafutha enhlanzi. Njengamanje, ingathengwa emakhemisi ngesimo samaphilisi. Le inketho enhle ngaphandle kokuhogela nokunambitha.
Ngenqubo yokupheka, kunconywa ukusebenzisa uviniga we-apple cider.
Iphayinaphu Kwanele ukudla kancane ukuze uqale izinqubo ezisebenzayo emzimbeni.
Imiphi imithetho okufanele ibonwe ngesikhathi sokudla:
Nikeza imifino, izithelo namajikijolo amasha.
Inyama ingahle ibe khona etafuleni, kepha ngemithamo emincane.
Inyama ingathathelwa indawo inhlanzi.
Khawula ukusetshenziswa kokubhaka.
Ukupheka kungcono ebhuthini eliphindwe kabili.
Udinga ukudla kaningi, kepha ukhishwa.
Qiniseka ukuthi uphuza njalo.
Okufanele ukudliwe nokuphuzwayo kwenqatshelwe:
Amafutha, isobho elinothile.
Uma inkomba ye-prothrombin yehlisiwe, lokhu kungakhombisa ukusebenza ngokweqile kweprotheni ye-prothrombin. Ukwehla kungabonakala kwabesifazane abakhulelwe, ezigulini ezine-polycythemia (lokhu kukhuphuka kokubonakala kwegazi), iziguli ezine-venous thrombosis.
Ukwehla kwesikhombi kungakhombisa lezi zifo ezilandelayo:
Imvamisa, ukwehla kwalesi sikhombisi kungenxa yokudla futhi kutholakala kubamele bengxenye eqinile yesintu. Ngamadoda enza ukukhetha esikhundleni semikhiqizo yenyama, adla imifino nezithelo ezimbalwa.
Yini okufanele uyenze uma inkomba ye-prothrombin yehliswa?
Imvamisa, ochwepheshe banquma iziguli zabo ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezinjenge-heparin, warfarin.
Ngokuhlangana nokwelashwa kwezidakamizwa, udinga ukuqapha indlela odla ngayo. Nalu uhlu lwemikhiqizo olunganconywa ukuthi lusetshenziswe ngezinga eliphansi le-prothrombin:
Ama-beet, iklabishi elibomvu, upelepele obomvu.
Ukhukhamba futhi wabhema.
Ukwehluleka kwe-prothrombin kungaholela ekopha. Zingavinjelwa uma ukudla okulungile kufakiwe njengendlela yokuvimbela ekudleni kwakho:
Amafutha enhlanzi nezinhlanzi.
Izithelo ze-citrus, ikakhulukazi ulamula.
Itiye green no cocoa.
Ama-cranberry, ama-raspberries noma amakhiwane.
Kukhiqizwa isibindi. Nguye obamba iqhaza ku-thrombosis. Ukuhlaziywa kwenkomba ye-prothrombin ne-protein fibrinogen kufaka phakathi izixhumanisi zamaketanga owodwa.
Lapho i-thrombin icushiwe, lokhu kufaka ushintsho ku-fibrinogen. Futhi yena, uguqulwa abe yimicu - i-fibrin. Le micu engenakuqhathaniswa ivela ngendlela yejazi legazi, esele idlala indima eqondile ukuvimba isitsha.
IProtein fibrinogen ifinyelela inani layo ezinsukwini ezimbalwa zokuqala ngemuva kokushaywa unhlangothi, ukushaya kwenhliziyo, ukuvuvukala nomkhuhlane. Ukwanda kwale nkomba kungabonakala kwababhemayo, abesifazane abakhulelwe, abantu abahlushwa yizifo zohlelo lwe-endocrine, kanye nokusetshenziswa isikhathi eside kwemithi ye-hormonal.
Ukwehla kwamaprotheni e-fibrinogen kuyabonakala kubantu:
ngesibindi nezifo zesisu,
ukungasebenzi ku-vithamini B12,
ngesikhathi sokukhulelwa, i-toxicosis,
ngenkathi uthatha ama-anabolics,
lapho uthatha iqembu elithile lemithi.
Okuwukuphela kwendlela yokuvimbela noma yisiphi isifo ukwenqatshwa kwemikhuba emibi, ukondliwa okufanelekile, ukukhishwa komzimba nokuhlolwa okufika ngesikhathi.
Ungakulungiselela kanjani ukuhlaziya:
Ukuze ungafaki izinto ezingathinta imiphumela yocwaningo, kuyadingeka ukulandela le mithetho yokuqeqeshwa elandelayo:
kunikezwe kuphela isisu esingenalutho ucwaningo!
ngaphambi kokunikela nge-venousgazi, mhlawumbe imizuzu engu-15 yokuphumula,
Emahoreni angu-12 ngaphambi kocwaningo kufanele kungafaki ukuphuza utshwala, ukubhema, ukudla ukudla, ukunciphisa ukusebenza komzimba,
ngaphandle kwemithi. Uma kungenzeki ukuyeka ukuphuza umuthi, kufanele wazise ilabhoratri ngakho,
izingane ezingaphansi kweminyaka engu-5, ngaphambi kokunikela ngegazi, qiniseka ukuphuza amanzi abilisiwe (izingxenye ezithile, kuze kufike ku-150-200 ml, imizuzu engama-30)
I-Prothrombin (PT) ekwakhiweni kwayo iprotheni eyinkimbinkimbi eyingxenye yomzimba womuntu. Ekusebenzeni komtholampilo, kusetshenziselwa ukuhlaziya isikhathi segazi. Le proteni iyingxenye yocwaningo olunzulu lwezinqubo zokuhlangana kwegazi, ezibizwa, ngokulandelana, i-coagulogram. Ngokungeziwe ekunqumeni le protein, ifaka ne (PV), (PI) ne (INR).
Indlela ethandwa kakhulu yokubonisa iprotheni enikeziwe ibizwa nge-Quick Prothrombin (PC). Ibizwe ngemuva kososayensi u-A. Kvik, owaphakamisa indlela yokuhlaziya izinga le-PT egazini emuva ngo-1935. Kuze kube manje, indlela esheshayo isaziwa kabanzi futhi isetshenziswa kabanzi ekunqumeni i-coagulogram. Emgogodleni wayo, le ndlela iqukethe ukuqhathanisa i-coagulogram yesiguli ngenani lesithenjwa se-plasma ejwayelekile. Umphumela we-PC uvezwa njengephesenti.
I-PC encane kakhulu ibhekwa lapho inkomba ingaphansi kwamaphesenti angama-78, inyuke uma inkomba ingaphezulu kwamaphesenti ayi-142.
Ukuhlolwa kwe-PC kusetshenziselwa kabanzi hhayi ku-coagulology ukuthola umsebenzi wezinto ezihlanganayo, kepha futhi nezifundo zamandla okusebenza kwesibindi, isisu kanye nesisu samathumbu. Kuyaqapheleka ukuthi i-PV ne-prothrombin coagulation index (PI) zisetshenziswa kaningi kakhulu, ngoba ubumbano lwabo luphansi - idatha etholakala emabhalabhoratri ehlukene ayinakuqhathaniswa.
Izinkomba zokuhlaziywa kwi-PC zinikezwa abantu ezimweni:
nokusolwa okuphazamisayo ezinqubweni zokuhlangana kwegazi,
ukulawula ukwelashwa lapho uthatha ama-anticoagulants (heparin, warfarin),
ingozi eyengeziwe yokuhlukunyezwa kwesibindi,
kokuphazamiseka lapho umbandela we-vithamini K ungaphansi kokujwayelekile noma ukwanda.
Ukuhlaziywa, inani elincane legazi le-venous liyathathwa. Ngaphambi kokuhlolwa, kunconyelwa ukuthi ungadli ukudla okungenani amahora ayisithupha ngaphambi kokuhlolwa. Ngosuku olwandulela isivivinyo, kufanele ukhawulele ukungena kwamafutha nokudla okuthosiwe. Abantu abavame ukuthatha izithasiselo zeVithamini K (i-warfarin) bawela esigabeni esikhethekile sokulungiselela ukuhlaziywa. Kufanele baphuze umuthi wosuku lomuthi kungakadluli i-16-00 ngosuku ngaphambi kokuhlolwa.
Kuyaqapheleka ukuthi ukuba khona kwamaprotheni e-fibrin noma e-myeloma emzimbeni kungathinta imiphumela yocwaningo.
Ukucaciswa kwemiphumela yokuhlolwa nokuqokwa kokwelashwa okuyikho kufanele kwenziwe kuphela ngudokotela. Uzokwazi ukuhlola lonke uhla lwedatha ye-coagulogram futhi ahlole ubungozi nobunzima besifo esiqhubekayo.
Kusho ukuthini imiphumela yokuhlaziywa ku-PC? Ukuhlehlisa ocwaningweni
Uma i-prothrombin ngokusho kwe-Quick ikhuphuka kakhulu (iphakeme kakhulu kune-150%), khona-ke izifo ezilandelayo zingathathwa:
ukuntuleka kokuzalwa kwezinto ezithile zokuqina,
ukuntuleka kwezimpawu zokubumbana, kepha esezitholile ngokuqukethwe kwezifo ezithile zesibindi, i-amyloidosis, isifo se-nephrotic, ukuba khona kwama-autoantibodies ezintweni zokuqina,
ukwehla kwezinga lomsebenzi ka-Vitamin K ngenxa ye-cholestasis (nezinye izifo),
isabalalisa i-intravascular coagulation syndrome (DIC)
ukusetshenziswa kwezidakamizwa, kufaka phakathi ama-anticoagulants, i-inagitors engabonakali (i-heparin, i-warfarin), ama-anabolic steroid, ama-antibhiteleni, i-acetylsalicylic acid, i-laxatives, i-methotrexate, i-nicotinic acid, i-diuretics,
Izifo ezisebenza nge-fibrin.
Uma inkomba Esheshayo yehliswa, udokotela angenza lokhu okulandelayo:
i-thrombosis (ukuvinjwa kwemithambo ngamagazi egazi),
i-polycythemia (ukuqina kwegazi ngokweqile, i-hypercoagulation),
ukulimala kwezicubu okuholela ekungeneni kwe-thromboplastin emithanjeni yegazi,
ukukhulelwa kanye nesimo sokubeletha,
ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezithile (izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo, i-mercaptopurine).
Ucwaningo lwe-PCs kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa
Ukuhlolwa kokuqina ngesikhathi sokukhulelwa kubekelwe abesifazane njengesifundo esidingekayo, okuyingxenye ye-coagulogram kanye nenkomba yokuqina. Ukucwaninga esifundweni senkomba yokuhlangana kanye ne-PC kuzovumela udokotela ukuthi akwazi ukubhekisisa impilo kahle futhi avikele nezinto eziningi eziyingozi.
Kuyaqapheleka ukuthi kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa, indlela ejwayelekile ye-PC incishiswa kancane ngenxa yokwakhiwa nokuthuthukiswa komjikelezo omusha wokujikeleza kwegazi kusuka kumama kuye enganeni. Futhi, izinga elingaphezulu kwesijwayelekile lisiza owesifazane ukuba alungiselele ukulahleka kwegazi okukhulu ngesikhathi sokubeletha.
Uma i-PC iphakanyisiwe ngesikhathi sokukhulelwa, ingadala ukopha kakhulu ngesikhathi sokubeletha, kubandakanya ukopha kwangaphakathi. Ukunakwa ejwayelekile kwenkomba esheshayo kungaholela ekushayweni kwe-hemolytic. Amaphesenti okushona kwabesifazane ngesikhathi sokuzalwa kwengane evela kule ndlela yengqondo aphakeme kunanoma yisiphi esinye isizathu.
Izinkomba ezingezansi kokujwayelekile yisizathu sokuqokwa kwama-coagulants.
Ukwehla kwe-PC ngesikhathi sokukhulelwa kusongela owesifazane onesifo i-thrombosis, ukuqhuma kwemithambo yegazi kanye nezinkinga ezihlobene.Ezimweni ezinjalo, odokotela bavame ukunquma ama-anticoagulants - izidakamizwa ezinciphile (i-warfarin).
Ukubaluleka kweprothrombin eyinkimbinkimbi
Ukungathandeki kwalesi sici kungaba ukuzalwa kabusha futhi kufundiswe inqubo yokuphila. Ukuntuleka kwe-Congenital prothrombin akuyona into evame kakhulu, okungukuthi, ingeyese-pathology engandile. I-prothrombin ephansi kusukela ekuzalweni kungenxa yokuguqulwa kwezakhi zofuzo ezitholakala ku-chromosome 11.
Nge-hypoproteinemia yanoma imuphi umsuka, njengomthetho, izinga lale proteni nalo lincishisiwe. Isibindi esihlaselwe yilesi sifo (i-hepatocytes yisayithi lokwakhiwa kwezakhi ezibalulekile zeprothrombin tata) kanye nokushoda kwe-K-Vitamin (i-Vitamin K ibandakanyeka ekwakhiweni kwe-FII nezinye izinto ezibizwa ngokuthi yi-K-based) inikezela ukwehla okukhulu ekugxileni kwale nkomba.
Okuqukethwe kwe-prothrombin okwehlisiwe kuzothatha isikhathi eside ukuqina . Ukunquma ukuthi uhlelo lwe-coagulation lusebenza kanjani ngokuya ngeleveli ye-prothrombin, ukuhlolwa kwe-coagulation kusetshenziswa ekuhlolweni kwelebhu yemitholampilo, okuvumela ukuthi ube nomqondo ngesimo se-prothrombin tata yonke:
I-PTI (inkomba ye-prothrombin, amaphesenti),
Isilinganiso se-Po (isilinganiso se-prothrombin, inani elingafani ne-PTI, ngamaphesenti),
I-PTV (isikhathi se-prothrombin, ngemizuzwana),
I-Prothrombin ngokusho okusheshayo (ukuhlaziywa okubucayi kakhulu kune-PTI ne-PTV, ngamaphesenti),
I-INR (isilinganiso samazwe omhlaba ejwayelekile, amaphesenti).
Ukusebenza ngokweqile kwe-prothrombin ngaphandle kwesidingo salokho kugcwele nezinkinga ezahlukahlukene, futhi, kwesinye isikhathi, inhlekelele yomzimba. Ukwanda kwe-coagulability, ukwakheka kweziqeshana okungavala umgodi obalulekile wegazi, kungaphenduka esimweni esiyingozi, ngisho nokufa.
Ukuhlolwa kweBenchmark nokuhlaziywa okugcwele
Ucwaningo lokuhlanganiswa kwegazi, njengomthetho, luqala ngezindlela ezilinganayo ezenza kube nokwenzeka ukuthola i-anomaly (prothrombin) ngaphandle kokudalula umongo wayo. Ngemuva kwalokho, kususelwa emiphumeleni yokuhlaziywa kwekhono lokujiya kwegazi, ezinye izindlela (ezivele zichaziwe) zichaziwe (PTV, INR, APTT kanye nezinye izinkomba ze-heestasiogram).
Ngokuqondene nokuhlolwa kwe-prothrombin, kuyingxenye ebaluleke kakhulu futhi kungenziwa kuvezwe ngezindlela ezahlukahlukene. Ukuntuleka kwezici ze-prothrombin tata (II, V, VII, X) kunqunywa ikakhulukazi ngokuhlaziywa kwe-PTV ngokusho okusheshayo, okuveza ngokuyinhloko ukwephulwa kokubunjelwa kwangaphandle kwe-thromboplastin. Kodwa-ke, ucwaningo oluhlukile lwalezi zinkomba kusisekelo samasampula wokufaka amanye amathuba kungenzeka.
Okwamanje, umuntu akakwazi ukungazinaki izinkomba zamandla okuhlangana kwegazi kwabesifazane ngesikhathi sokuhlela noma ukuqala kokukhulelwa, ngoba lokhu kukuvumela ukuthi ubale izingozi ezingaba khona ngesikhathi sokubeletha. Ukhumbula idatha yezinkomba ngesikhathi sokukhulelwa, kungenzeka ukubona kusengaphambili futhi kuvimbele ukopha (uma i-PTV ihlala isikhathi eside) noma ukuthuthukiswa kwe-thrombosis kanye nokubanjwa kwangaphambi kwesikhathi kwe-placenta, uma igazi libonisa ukuthambekela okuphezulu kokuphanjaniswa. Ngesikhathi sokulethwa, isikhathi se-prothrombin sifinyeziwe ngokuqhathaniswa nokujwayelekile, futhi inkomba ye-prothrombin iyanda. Kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa nokubeletha, ucwaningo lomsebenzi wegazi elihlanganayo akubizi kuphela izinkomba ze-prothrombin tata. Ukuze ube nesithombe esiphelele samandla okusebenza kohlelo lwe-heestatic, omama abakhulelwe babelwe izinkomba eziphelele ze-coagulogram .
Isikhathi se-Prothrombin, njengokuhlolwa kwelabhoratri, sivumela odokotela ukuthi bahlaziye ngokushesha hhayi kuphela uhlelo lwangaphandle lwe-heestasis, kepha wonke umbandela wokuphendula kwegazi okwenzeka.
Ezimweni eziphuthumayo zomzimba (ukulimala ngomonakalo wezicubu, ukopha okushubile, i-necrosis kanye nezinye izimo ze-pathological), i-glycoprotein ingena egazini, amaprotheni e-membrane - protein tisomboplastin, okubonisa ukufakwa kwesistimu yokulondolozwa (yangaphandle) ye-heestasis.
I-Tissue (cellular) thromboplastin, ebizwa nge-tiski factor (TF), esebenzisana nezinto ezibambekayo (FVII) ezijikeleza egazini, ngokulandelana zifaka ezinye izinto ze-plombma thromboplastic. Lokhu kusho ukuthi uhlelo lwe-hemocoagulation lusebenze futhi isigaba sokuqala sokuhlangana siqala - ukuguqulwa kwe-prothrombin engasebenzi ibe yi-thrombin esebenzayo. I-Thrombin ibangela ukuguqulwa kwe-enzymatic ye-fibrinogen ku-fibrin, izinto (V, VIII, IX, XIII) zenziwa ngaphansi kwethonya lazo, zibhubhisa ama-platelet, okubangela (kanye neCa ++) i-metamorphosis ye-plasset ye-viscous.
Imvamisa ye-PTV kubantu abadala isukela kumasekhondi ayi-11-15 (ezinsaneni ezisanda kuzalwa efinyelela ezinsukwini ezi-3-4 zokuphila - 12-18, ezinganeni ngaphambi kwesikhathi - 15-20). Ezinganeni ezisanda kuzalwa ezigcwele kusukela ezinsukwini ezingama-4-5 zokuphila, isikhathi se-prothrombin silingana nesomuntu omdala.
Inkomba le iyandisiwe (isikhathi sokuhlanganisiwe) kulezi zimo ezilandelayo zokusizakala:
Izifo zesibindi, ngoba kukhona ukwakheka kwe-prothrombin,
Ukushoda kweVitamin K, ukubamba iqhaza kwayo okudingekayo ekuhlelweni kwezici ezincike ku-K (i-prothrombin nayo ingeyabo),
Ukunyuka kwezinga, ukuvimba I-thrombin nezinye izici zohlelo lwe-hemocoagulation,
Ukwanda kwekhono le-fibrinolytic yegazi (Ukuchithwa kweziqeshana),
I-pathology ehlukile ye-hematological (myeloid metaplasia),
I-Grbn (isifo se-hemorrhagic yosanda kuzalwa),
Amazinga aphezulu amaseli abomvu egazi (ngaphezulu kuka-6.0 x 10 12 / L),
Lonke igazi elithathwe nge-anticoagulant (i-sodium citrate) lisebenza njengezinto eziphilayo zokufunda isikhathi se-prothrombin kusetshenziswa indlela ye-Quik single-isigaba (okubizwa ngokuthi ukuhlaziywa).
I-PTV, isivivinyo esisheshayo noma isikhathi se-thromboplastin - inkomba yohlelo lwangaphandle lokwenza kusebenze i-factor II, lapho isikhathi se-prothrombin sincike ekugxambeni kwe-fibrinogen ku-plasma yegazi, izici V, VII, X. Isimo se-PTV (isivivinyo esisheshayo) sinqunywa umsebenzi we-thromboplastin futhi yimizuzwana eyi-12-20.
Ubunye nomzabalazo wabaphikisi
Ukwephulwa kohlelo he hentatic kuholela ekuthuthukisweni kwama-coagulopathies, lapho i-pathology, evame ukutholakala khona i-thrombosis, imvamisa iboniswa yigama, futhi izifo ezihambisana nokukhuphuka kwegazi kuthiwa "yi-hemorrhagic diathesis." Ukwephulwa kwamakhono wokuqina kwegazi kungabangelwa ifa noma kudalwe ezimeni ezakhiwe ngesikhathi sokuphila (izifo zesifo se-parenchyma, ukusweleka kwe-K-Vitamin, ukusetshenziswa kwama-anticoagulants ngezinhloso zokwelapha, ukusebenza kohlelo lwe-fibrinolytic).
Ukuthuthukiswa kwe-hemocoagulation disorder syndrome kubangelwa ukulahleka (noma ukuncipha) emandleni amaseli wesibindi ku-biosynthesis ye-coagulation factor. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuqashelwe ukuthi izici zokuxuba, i-anticoagulation ne-fibrinolysis system azikho zodwa, umsebenzi okhubazekile wanoma yisiphi isixhumanisi esisodwa uholela ezimeni ze-pathological zezinye izingxenye. Isibonelo:
Ukuphazamiseka kwe-biosynthesis kweprotheni okubhekwe ngathi - i-prothrombin, ngokuqinisekile kuzoholela ekuphulweni kokukhiqizwa kwezinye izinto (i-VII, IX, X) kanye nokuntuleka kwazo zonke izakhi zephrothrombin tata, okuzobe sekuholela ekunciphiseni komsebenzi we-FV, ukwanda kokuxineka kwama-fibrin monomers, ukwehla kwamandla we-FXIII yomsebenzi kanye nokwanda kwamandla we-FXIII. ukuhluza.
Ukwephulwa kwe-fibrinogen metabolism kuzodala ushintsho ekwakhekeni kwesakhiwo se-profibrin semithambo yegazi, kuvule indlela yokuhamba kwamangqamuzana egazi abomvu ngokusebenzisa izindonga zemithambo yegazi.
Ukuhlanganiswa kwezakhiwo ezibonakala ziphambene ngokuphelele zalezi zinhlelo ezingenhla (ngokuya ngokusebenza kwazo okujwayelekile) kuqinisekisa isimo segazi esilihamba ngokukhululeka kuyo yonke imithambo yegazi yomzimba, nokuqubuka kwaso, uma kuba nesidingo sokufaka izikhala ezakhiwe ngenxa yokulimala kwezicubu.
Ucwaningo lungandiswa ...
Uma izindlela ezichaziwe zingenalo ulwazi oluphelele, izifundo zohlelo lwe-heestatic zingandiswa, ngokwesibonelo, ngokufunda imisebenzi yomuntu ngamunye namanani wokubala wezinto zeplatma neplasma. Ukuhlolwa kwe-prothrombin kunikeza isisekelo sokusesha kwezinkinga ezahlukahlukene ze-hemocoagulation, kuphakamisa ukuqondisa kocwaningo olwengeziwe. Kuze kube manje, phendukela ekunqumeni kwamanye amapharamitha we-hemostasiogram:
Izinga lokushintshwa kwe-fibrinogen liye ku-fibrin (isikhathi se-thrombin),
Kuhlolwa nini isivivinyo se-prothrombin?
Ukunqunywa kwamapharamitha we-coagulation wegazi kunenani elibaluleke kakhulu lokuxilonga. Umgomo oyinhloko ukuthola ukuthi kungaba yini ukopha okukhulu noma ukuchitheka kwegazi. Ukubalwa kwe-prothrombin ngokusho kwe-Quick, inkomba ye-PTI, isikhathi se-prothrombin ne-prothrombin ngokusho kwe-INR kwenziwa ezimeni ezilandelayo:
Isiguli sihlelelwe ukuhlinzwa.
Ukuphuphuma kwesisu (ikakhulukazi okuphindaphindwe).
Imithambo ye-Varicose, i-thrombosis, i-pulmonary embolism.
Izifo zenhliziyo nemithambo yegazi.
Ukuhlola ukubalwa kwegazi lapho uthatha ama-anticoagulants.
Ukuxilongwa kwesifo sesibindi.
Ukuya esikhathini okuningi kwabesifazane.
Ukuthambekela kwesiguli kokukhala kwempumulo, ukulahleka kwegazi okukhulu ngemikhuhlane emincane, izinsini ezopha igazi.
Ukwakheka kwama-hematomas amakhulu namaqhubu, ngisho nokulimala okuncane nokulimala okuncane.
Ngokuyinhloko, noma yikuphi ukusola kwenkinga yokuphuma kwegazi kuyinkomba yokubala inkomba ye-prothrombin namanye amapharamitha e-prothrombin. Ngakho-ke, ukuhlaziya okunjalo ngezinhloso zokuxilonga kungabekwa udokotela wezinhliziyo, udokotela ohlinzeka nge-traumatologist noma udokotela ohlinzayo ngokuxilongwa okuphuthumayo, kanye nodokotela ovela emtholampilo wezinyanga zokubeletha ukuqaphela izinga le-prothrombin ngesikhathi sokukhulelwa.
Ngabe kwenziwa kanjani ukuhlaziya?
Ukuhlaziya, igazi lithathwa emthanjeni. Igazi lifakwa kwishubhu yokuhlola ene-sodium citrate, efakwe ku-rotor ye-centrifuge yezokwelapha, lapho i-plasma ihlukaniswa khona namaseli egazi ngesikhathi sokujikeleza.
Isampula yegazi kufanele yenziwe esiswini esingenalutho - okungcono, isidlo sokugcina bekungamahora ayi-12 ngaphambi kokuthatha i-biomaterial (kodwa hhayi ngaphezulu kwamahora ayi-15). Ngobusuku bokuqala bokuhlaziywa, isiguli kufanele sikugweme ukusetshenziswa kwama-ayolisa kanye nokudla okunamafutha ukuze kugwemeke ukuphambuka komphumela. Okufanayo kuhamba notshwala. Isiguli kufanele senze ukuhlaziywa kusesimweni esizolile - ngaphandle kokuzivocavoca ngokomzimba nokucindezela. Ungaphuzi ikhofi, ujusi, iCoca-Cola, utshwala noma intuthu ngaphambi kokuhlaziywa.
Ithonya elikhulu kumphumela wokuhlaziywa yizidakamizwa ezithathwa yisiguli. Uma kungenzeka, izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuthatha igazi, kufanele uphazamise inkambo yokwelashwa. Uma ikhefu elinjalo lingenakwenzeka, khona-ke yazisa udokotela wakho.
Kungani kuphakama i-prothrombin?
Lapho i-prothrombin iphakanyisiwe, igazi liba likhulu, elehlisa ukuhamba kwalo emithanjeni yegazi. Igazi elincanyana likhulisa kakhulu ingozi yokuqhekeka kwegazi, elingavimba isitsha segazi. Lesi yisimo esiyingozi kakhulu esingaholela ekushayweni noma ekushayweni yinhliziyo ngomphumela obulalayo, ngakho-ke ukwelashwa kufanele kuqale ngokushesha.
Izici ezifaka isandla ekwandeni kwe-prothrombin ngokuya nge-Quick:
I-Vitamin K ethe xaxa emzimbeni - ngokudla kwayo isikhathi eside, kanye nokusetshenziswa ngokweqile kwesibindi sengulube, amaqanda enkukhu, isipinashi, amakhambi, itiye eliluhlaza.
Ukusetshenziswa isikhathi eside kwama-antihistamines, imithamo eyeqile ye-aspirin, ama-laxatives, ama-anticoagulants, ukusetshenziswa kwama-barbiturates, ama-corticosteroids, ama-heparin, i-nicotinic acid, amaphilisi okulawula ukuzala.
Ukukhulelwa - ku-trimester yesithathu, ukuhlaziywa kwe-prothrombin kuyadingeka.
Isici sofuzo ukugula kwegazi.
Ukumpontshelwa igazi, vasculitis, thromboembolism.
I-DIC-syndrome - ukusakazeka kokuqina kwemizwa.
Isici sobudala, iProthrombin, ngokusho kweShesha, ikhuphuka ngemuva kweminyaka engama-45 kwabesilisa nabesifazane.
Ukunciphisa i-prothrombin egazini, isiguli kufanele siguqule indlela yaso yokuphila futhi silandele indlela ekhethekile yokudla. Udinga ukwanelisa ukudla kwakho ngokudla okunomthelela ekunciphiseni kwegazi. Masibhale: i-beet, uwoyela wezinhlanzi, ujusi we-utamatisi, i-oatmeal, amajikijolo amasha, i-ginger, i-olive, i-apple cider uviniga, uphayinaphu, i-sea kale. I-Oatmeal, isidlo semifino kanye nokudla kwasolwandle izitsha eziphambili zokudla kwakho. Phuza ujusi omuncu osanda kufakwa kanye namalitha amanzi okungenani ayi-1.5 ngosuku.
Kukhona futhi okwenqatshelwe ekudleni: kufanele ungafaki ngokuphelele izitsha zokubhema, ezinamafutha nesipayisi, ukudla okusemathinini, utshwala ekudleni, futhi ukhawule ukusetshenziswa kwezimpahla ezibhakiwe, amakhambi, kanye nokwenziwa okukhohlakele ngangokunokwenzeka. Inyama yamukelekile, kepha yifomu ebilisiwe kuphela (akukho ukuthosa!), Kungcono ukubuyisela izitsha zenyama nezinhlanzi - kunconywa ukuyipheka uswebe.
Ungadli ngokweqile. Faka kangcono okunye ukudla ekudleni kwakho, kepha yehlisa izingxenye. Ungadli ukudla ebusuku - kuyingozi ngisho nakubantu abaphilile ngokuphelele.
Umsebenzi womzimba kufanele ususwe, kepha njalo. Gwema ukusebenza ngokweqile, kuleli cala umthwalo osenhliziyweni nemithambo yegazi uyanda. Ukuhamba kusihlwa okungahanjiswa nsuku zonke emoyeni ohlanzekile kuyindlela engcono kakhulu.
Nge-prothrombin eyandayo kanye nanoma yiziphi izinkinga ngokuqubuka kwegazi kwabesifazane, amaphilisi okulawula ukuzala ngokuvamile ayayeka. Ukuthatha ezinye izidakamizwa ezidakwa njalo kufanele kuxoxiswane nodokotela wakho.